အရာရှိမ ဒျေါထားထားစိုး နဲ့ နမေိုး – My Blog
အရာရှိမ ဒျေါထားထားစိုး နဲ့ နမေိုး
နမေိုးသညျ အသကျ ၂၅ နှဈခနျ့ရှိပွီး ရုံးတဈရုံးတှငျ စာရေးအဖွဈ အလုပျလုပျနသေညျ ။ သူ၏ အဓိက ဝငျငှလေမျးကတော့ ရာဂ ကွှယျ ရမကျထနျကာ လောကစညျးစိမျ ကောငျးကောငျး ခံစားပြျောပါးလိုသော အမြိုးသမီးမြားကို အခကွေးငှယေူကာ လိုးပေးရ သော အငှါးလငျ အလုပျဖွဈသညျ..။ အပတျစဉျ တနင်ျလာနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ နမေိုး အငှါးလငျအဖွဈ အလုပျသှားလုပျလရှေိ့သညျ..။
နမေိုး၏ အထကျအရာရှိ ဒျေါထားထားစိုးမှာ ရှမျးတရုတျမ တဈယောကျဖွဈသညျ ။ အသကျအရှယျကတော့ နမေိုးနှငျ့ မတိမျးမယိမျး ဖွဈသညျ ။ အသားဖွူကာ အရပျမွငျ့ပွီး ကယိုလုံးကိုယျပေါကျ ဆူဖွိုးတောငျ့တငျးသညျ ။ ဒျေါထားထားစိုး၏ လငျ တျောမောငျက အငျဂငျြနီယာကွီး တဈယောကျဖွဈကာ နိုငျငံခွားတှငျ သှားရောကျ အလုပျလုပျကိုငျနသေညျ ။ ကလေးလညျး မမှေး ကွသေး ။ နမေိုးသညျ သူ့အထကျအရာရှိမ ဒျေါထားထားစိုးကို ကွိတျပွီး သဘောကနြသေညျ ။ သို့သျော နီးစပျရနျ ဖနျဖို့ အခှငျ့အလမျး မရသောကွောငျ့ ကွတိပွီးတော့သာ ပဈမှားနပွေီး ၊ခိုးလို့သာ ငမျးနရေသညျ ။
တဈခုသော တနင်ျလာနတှေ့ငျ နမေိုးသညျ ရုံးတှငျ အလုပျမြားသှားကာ ရုံးဆငျးနောကျကသြဖွငျ့ အငှားလငျအဖွဈ အလုပျလုပျရာ နရောသို့ တဈနာရီလောကျ နောကျကမြှ ရောကျသှားခဲ့ရာ ဒျေါထားထားစိုးကို အထူးအမှောငျခနျးချေါ အလငျးရောငျ လုံးဝမရှိပဲ မှောငျခထြားသော အခနျးထဲတှငျ ကာမစညျးစိမျခံစားပြျောပါးရနျ ဝငျရောကျဖို့အတှကျ အဝတျလဲခနျး၌ အဝတျအစားမြား ခြှတျ နသေညျကို ခြောငျးကွညျ့ပေါကျမှ အသာခြောငျးကွညျ့ တှမွေ့ငျခဲ့သညျ ။
ဒျေါထားထားစိုးကို လိုးပေးရမညျ့ အငှါးလငျမှာ နမေိုး၏ သူငယျခငျြး လုပျဖျောကိုငျဘကျ သနျးဝငျးဖွဈသညျ ။ သနျးဝငျးက မိမိမှာ ဧညျ့သညျ မိနျးကလေး ငယျငယျ တဈယောကျနှငျ့ အပွတျလိုးထားရလို့ သညျမိနျးမကွီးကို တဈရှိုးစာ အပွညျ့ မခနြိုငျ ၊ တဈခြီ လောကျသာ ဝငျခပြွီး မိမိနှငျ့ လာပွီး လူစားလဲရနျပွောရာ နမေိုးက အကွိုကျတှပွေီ့း သဘောတူလကျခံလိုကျသညျ ။ အမှောငျခနျး ထဲတှငျ နမေိုးနှငျ့ ဒျေါထားထားစိုး ကာမစပျယှကျ ပြျောပါးကွသညျ ။ မှောငျနသေောကွောငျ့ မိမိနှငျ့ စပျယှကျနသေူမှာ မိမိ၏ လကျအောကျမှ စာရေးလေး နမေိုး ဖွဈကွောငျး အစပိုငျးတှငျ ဒျေါထားထားစိုး မသိခဲ့ပေ ။ သို့သျော ဒျေါထားထားစိုး၏ ဖငျကို နမေိုး က ပယျပယျနယျနယျလိုးနသေညျ့ အခြိနျတှငျ ခုတငျဘေးဘောငျတှငျ တငျထားသော ( မိမိကိုလိုးနသေညျ့ အငှါးလငျနှငျ့ လငျး လငျးခငျြးခငျြး ကွညျ့မွငျလိုလငျြ လပျြစဈမီးဖှငျ့နိုငျဖို့ စီစဉျထားသညျ့ ) ခလုတျလေး ရှိသညျ ။
ဖငျလိုးခံရငျး ဖီလငျတှေ အရမျးတကျနသေော ဒျေါထားထားစိုးက မတျောတဆ ထိကိုငျနှိပျမိရာမှ မီးရောငျလငျးလာကာ ဖငျလိုးဖငျခံ လုပျနကွေသူနှဈယောကျ တဈယောကျကို တဈယောကျ မွငျတှသှေ့ားခဲ့ကွရသညျ..။ နမေိုးက ကကြနြန ဖငျလိုး အဖုတျပှတျပေး ထားရာ ဒျေါထားထားစိုးမှာ ခံစားနရေသော ကာမစညျးစိမျခမျြးသာကို လကျလှတျမခံနိုငျပဲ ၊ မိမိကို ဖငျလိုးနသေူမှာ မိမိ၏ လကျအောကျမှ စာရေးဖွဈသူ နမေိုးမှနျး သိလြှကျနှငျ့ ဆကျပွီး အလိုးခံလတေော့သညျ ။ သညျလိုနှငျ့ ပွလေညျသှားကွကာ နမေိုး က ဒျေါထားထားစိုးကို ကာမအရသာ တနငျ့တပိုး ခံစားရရှိစရေနျ သူတတျမွောကျထားသော ကြှမျးကငျြမှု နညျးလမျးအားလုံးကို အိပျသှနျဖာမှောကျ အကုနျအစငျထုတျသုံး လိုးပေးရာ လိုးသူနမေိုးရော အလိုးခံသူ ဒျေါထားထားစိုးပါ မကွုံဖူးသော ဖီလငျတှေ ခံစားရလြှကျ အရသာကောငျးကောငျးတှသှေ့ားခဲ့ရလသေညျ……..။
တဈရှိုးစာ လိုးပှဲအတှကျ သတျမှတျထားသော အခြိနျ ၃ နာရီ စသှေ့ားသညျ့ အတှကျ အလိုးရပျ ၊ စပျယှကျမှုမြား တဈစခနျး သတျ သောအခါ နမေိုးနှငျ့ ဒျေါထားထားစိုးတို့သညျ အထူးအမှောငျခနျးထဲတှငျ ထုံးစံအတိုငျး မိမိတို့နှငျ့ သကျဆိုငျသညျ့ ဝငျပေါကျ အသီးသီးမှ လမျးခှဲထှကျလာခဲ့ကွသညျ ။ နမေိုးအနဖွေငျ့ သူကွိတကျာ သဘောကနြခေဲ့သော သူ့ အထကျအရာရှိ ဒျေါထားထားစိုး ကို ပယျပယျနယျနယျ လိုးခဲ့ရသညျ့အတှကျ အထူးပငျပြျောရှငျကနြေပျမိသလို ၊ ဒျေါထားထားစိုးမှာလညျး သူမကွုံဖူးသမြှသော ပြျောပါးစပျယှကျမှုမြားတှငျ အထူးကဲဆုံးသော ကာမအရသာနှငျ့ စိတျလှုပျရှားမှုမြား ခံစားခဲ့ရသညျ့ နမေိုးနှငျ့လိုးခဲ့ရသော ယခုလိုးပှဲ ကို စှဲစှဲမကျမကျ ဖွဈသှားခဲ့ရသညျ..။
လိုးရသညျကို ပငျ အားမရနိုငျခဲ့သေး..။ ထို့ကွောငျ့ အငှါးလငျးမြားနှငျ့ ဆုံတှေ့ ပြျောပါးစပျယှကျမှု အ၀၀ကို တာဝနျယူစီမံ ဆကျ သှယျဆောငျရှကျပေးသူ မာမီအေး အားသှားရောကျတှဆေုံ့ကာ အမှောငျခနျးထဲတှငျ သူမနှငျ့ ပြျောပါးခဲ့သူ နမေိုးကို မနကျဖွနျတှငျ အထူးအျောဒါယူကာ တဈရှိုးစာ ထပျမံပြျောပါးလိုကွောငျး ပွောဆိုခဲ့လသေညျ..။ မနကျဖွနျ နမေိုးအလုပျဆငျးတဲ့နေ့ မဟုတျဘူး ၊ တဈခွားလူတဈယောကျနဲ့ လာပြျောခငျြရငျတော့ ရနိုငျလိမျ့မယျ… ကမြက နမေိုးဆိုတဲ့လူနဲ့ပဲ ပြျောခငျြတာ .. သူအလုပျဆငျးတဲ့နေ့ မဟုတျပမေဲ့ စပါယျရှယျ… အျောဒါလုပျပွီး ခြိနျးလိုကျလို့ မရဘူးလား..၊ မနကျဖွနျ မရရငျတောငျ သနျဘကျခါ ပေါ့…. ဟာ..အဲဒါလဲ မရနိုငျဘူးလေ..၊ မာမီတို့ဆီမှာက ကောငျလေးတှကေို တဈပတျတဈခါပဲ အလုပျလုပျရပွီးတော့ ၊ အလှညျ့ကြ နားနနေိုငျအောငျ စီစဉျ ထားတာ..ညီမရဲ့..၊ ဒီအလုပျက အားပွညျ့လနျးဆနျးနဖေို့ လိုတယျမဟုတျလား..၊ ခွောကျရကျနားထားပွီး အားအပွတျ ပွနျပွညျ့နမှေ ဧညျ့သညျမိနျးမတှေ အရသာကောငျးကောငျး ခံစားရအောငျ အလုပျလုပျပေးနိုငျမှာပေါ့..ညီမကွီးရယျ..၊ နမေိုးနဲ့ ရှငျတကယျပြျော ခငျြတယျဆိုရငျတော့ နောကျအပတျ တနင်ျလာနအေ့ထိ စောငျ့ရလိမျ့မယျ…
ဒျေါထားထားစိုး အနညျးငယျတှပွေီး စဉျးစားနသေညျ ။ တဈပတျကွီးမြားတော့ သူမအနနှေငျ့ မစောငျ့လို ။ မိမိနှငျ့ တဈရုံးတညျး အတူတူ အလုပျလုပျနသေညျမို့ နမေိုးကို မိမိဖာသာ အခြိနျးအခကျြလုပျကာ ပြျောပါးလို့ ရနိုငျကွောငျး စဉျးစားမိသညျ ။ ကောငျးပါ ပွီ… ဒါဆိုလဲ ကမြစောငျ့လိုကျမယျ .. နောကျလာမဲ့ တနင်ျလာနမှေ့ာ သူနဲ့တှခေ့ငျြတယျ.. ဒါဆိုရငျ စရံတော့ ပေးသှားရလိမျ့မယျ… ဒျေါထားထားစိုး မာမီအေးတောငျးသော စရံငှကေို ပေးခပြွေီးနောကျ အငှါးလငျမြားနဲ့ ပြျောပါးရာမှ ပွနျထှကျလာခဲ့သညျ ။အိမျသို့ ပွနျရောကျသောအခါ နမေိုးနှငျ့ လိုးခဲ့ဆျောခဲ့ပုံမြားကို ပွနျသတိရနသေညျ ..။ ထိုနညေ့က ဒျေါထားထားစိုးသညျ မမကျစဖူး ကာမ စပျယှကျခံရသညျ့ အိပျမကျကို မကျသညျ.။ အိပျမကျထဲတှငျ သူမနှငျ့ ကာမစပျယှကျခဲ့သူကလညျး နမေိုးပငျ ဖွဈနပေါသညျ..။
နောကျတဈနနေံ့နကျ ရုံးသို့ ရောကျသောအခါ ဒျေါထားထားစိုးမှာ နမေိုးနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျရမှာ မကျြနှာပူသလိုလို ၊ ရှကျရှံ့သလိုလို ဖွဈနသေညျ ။ နမေိုးမှာလညျး အတျောပငျ နရေခကျနသေညျ..။ နှဈယောကျစလုံးပငျ အရငျနေ့ ညနပေိုငျးက ရကျရကျရောရော ကာမစပျယှကျခဲ့ကွပုံမြားကို ပွနျလညျမွငျယောငျကာ နကွေသညျ..။ နမေိုးအနဖွေငျ့ ဒျေါထားထားစိုးကို ကွညျ့မိတိုငျး မိမိမွငျခဲ့ တှခေဲ့ အားရပါးရ ကိုငျတှယျခဲ့လသေော ရငျသားတငျသား ပေါငျလုံးပေါငျတနျမြားကို အထငျးသား အရှငျးသား ကှကျကှကျကှငျးကှငျး မွငျလာလကျြ လီးမှာလညျး မတျခနဲ တနျးခနဲ တောငျကာနရေသညျ ..။ဒျေါထားထားစိုးအဖို့လညျး နမေိုးကို ကွညျ့မိလတေိုငျး မိမိကို တကျခှလိုးခဲ့ပုံမြား နှငျ့ နမေိုး၏ ကွီးမားတုတျခိုငျလှသော လီးခြောငျးကွီးကို မွငျယောငျကာ အဖုတျထဲမှာ စိုစိစိ ၊ ဖငျပေါကျက ယားသလိုနှငျ့ အရမျးကို နရေခကျနသေညျ ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ စကားပွောရမညျ ကိုပငျ ရှံ့တှနျ့တှနျ့ ဖွဈကာနကွေသညျ..။ လူခငျြးမတှဖေူ့းပဲ မိဘဆှမြေိုးမြား စစေ့ပျပေးမှုကွောငျ့ ညားခဲ့ရသော ဇနီးမောငျနှံတှလေို မင်ျဂလာဦးညလှနျမွောကျကာ နောကျတဈနေ့ တှငျခံစားရသော ခံစားမှုမြိုး နှငျ့ အတျောပငျ ယငျးထ နကွေသညျ..။
နမေိုးတို့လို အငှါးလငျမြားတှငျ မိမိတို့ စပျယှကျဖြျောဖွပေေးခဲ့ဖူးသညျ့ ဧညျ့သညျအမြိုးသမီးမြားနှငျ့ မတျောတဆ အပွငျဘကျတှငျ တှဆေုံ့မိလငျြ မသလိုကျ မသိဖာသာ နပေေးရသော စညျးကမျးရှိသညျ..။ ဧညျ့သညျ အမြိုးသမီးမြားကလညျး မိမိတို့နှငျ့ လိုးဖူး သော အငှါးလငျ တဈယောကျယောကျကို အလုပျနရော မဟုတျသော အခွားတဈနရောတှငျ တှဆေုံ့မိပါက မသိသလို ခပျတညျ တညျ နကွေတာမြားသညျ..။ပွောရလငျြ အငှါးလငျမြားနှငျ့ ပြျောပါးကွသူ အမြိုးသမီးမြားသညျ အလုပျနရောတှငျသာ။ တှဆေုံ့ ပြျောပါးကွသညျမှလှဲပွီး အပွငျအပတှငျ အသိအကြှမျးဖွဈသှားကွမှု ရှားပါးသညျ..။ ယခု ဒျေါထားထားစိုးကတော့ နမေိုး၏ အထကျအရာရှိ ဖွဈနလေရော နမေိုးမှာ ခါတိုငျးလို ဆကျဆံ ပွောဆိုရကောငျးနိုး ၊ မသိသလိုပဲ ခပျတညျတညျ နရေကောငျးနိုးနှငျ့ အခကျတှနေ့ရေလသေညျ..။ ဒျေါထားထားစိုးသညျ နမေိုးနှငျ့ သီးသနျ့ တှဆေုံ့နိုငျရနျ ခြိနျးဆိုဖို့ စိတျကူးရှိသျောလညျး ဘယျက ဘယျလို စတငျကာ အခြိနျးအခကျြ လုပျရမညျကိုတော့ စဉျးစားမရ ဖွဈနသေညျ..။
သူမသညျ ရာဂရမကျ ထနျပွငျးပွီး လိုအငျကွီးမားသော မိနျးမ တဈယောကျဖွဈသျောလညျး ဆိတျကှယျရာ လူသူကငျးဝေးရာတှငျ သာ အရှကျအကွောကျမရှိ ကာမအရသာကို အပီအပွငျ ခံစားမညျ ၊ လူရှသေူ့ရှတှေ့ငျတော့ ပိပိပွားပွား ၊ အရှကျအကွောကျ ကွီးသော ဂုဏသျရရှေိ အမြိုးသမီးကွီးတဈယောကျအနဖွေငျ့သာ နထေိုငျသှားလာသညျ။ အခု သူမ၏ တနျဖိုးထားရသော ရာထူး ဂုဏျသိမျ အမှတျအသားဖွဈသော ရုံးနရောတှငျ မိမိ၏ လကျအောကျမှ စာရေးလေးကို အငှါးလငျ အဖွဈ သဘောထားကာ အခြိတျအဆကျပွုလုပျ ပွောဆိုဖို့ရာမှာ အတျောဝနျလေး ခကျခဲရသညျ..။ ဒီလိုနဲ့ တဈရကျ ကုနျဆုံးသှားသညျ..။ နောကျတဈနတှေ့ငျ တော့ ဒျေါထားထားစိုးမှာ ရုံးအလုပျဖွငျ့ အပွငျသို့ သှားနရေပွီး ရုံးသို့ ညနေ ရုံးဆငျးကာနီးလောကျမှ ပွနျရောကျရာ သူမနှငျ့ နမေိုး တှရေုံ့မွငျရုံမြှလောကျသာ ရှိခဲ့သညျ…။ နောကျတဈရကျမှာလညျး ရုံးအလုပျမြား ပုံကကြာ အလုပျရှုပျနခေဲ့ရပွီး နမေိုးနှငျ့ တတေ့ဆေို့ငျဆိုငျ ပငျ မကျြနှာခငျြးမဆိုငျဖွဈခဲ့ရပေ..။ ဒျေါထားထားစိုး၏ ကာမရမကျစိတျမြားမှာ ရကျကွာလာသညျ့အခါ လြှော့ကြ ခွငျး မရှိပဲ ထနျပွငျးမွဲ ထနျပွငျးနသေညျ..။
ဒီလိုနဲ့ သောကွာနတှေ့ငျတော့ နမေိုးကို မဖွဈဖွဈအောငျ ခြိနျးဆိုကာ ညနပေိုငျးတှငျ အတူတူ တဈနရောရာ သှားပြျောပါးရနျ ဒျေါ ထားထားစိုး ကွံစီစိတျကူးမိတော့သညျ..။ ပါးစပျနှငျ့ ပွောဆိုဖို့ ဝနျလေးသောကွောငျ့ စာတဈစောငျ ကွိုတငျရေးထားသညျ..။ နမေိုး ကို အမှတျမထငျ အသာ စာပေးပွီး အခြိနျးအခကျြ ပွုလုပျရနျဖွဈသညျ..။ အကွံကကောငျးသျောလညျး ထိုနတှေ့ငျ နမေိုးတဈ ယောကျ ရုံးမတကျပဲ ခှငျ့ယူသောကွောငျ့ ဘယျလိုမှ အကောငျအထညျ မဖျောနိုငျခဲ့ရပေ..။ သညျကောငျလေး ဘာလို့မြား ခှငျ့ယူတာ ပါလိမျ့..၊ အငှါးလငျအဖွဈ နဘေ့ကျ အလုပျမြား သှားလုပျနရေောလားဟုပငျ ဒျေါထားထားစိုး တှေးမိလသေညျ..။ သို့သျော နမေိုး အလုပျရှငျ မာမီအေးက ( ယောကျြားထိနျးဟု ချေါရမညျလား မသိ ) နမေိုးသညျ တနင်ျလာနေ့ တဈရကျသာ အလုပျလုပျသညျဟု ပွောထားသညျ့တိုငျ ၊ ဒျေါထားထားစိုးမှာ သို့လောသို့လော အတှေးမြားဖွငျ့ စိတျမောနရေတော့သညျ..။ နောကျနမြေ့ားမှာတော့ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ ကသြဖွငျ့ သူမ မခငျြ့မရဲ ဖွဈကာ စိတျလြှော့လိုကျပွီး တနင်ျလာနကေ့မြှသာ ဒီငနဲ လိုးတာ အပီခံပဈလိုကျတော့မညျ ဟု စိတျထဲ တေးမှတျထားလိုကျသညျ..။ နောကျဆုံးတော့ ဒျေါထားထားစို အားခဲ မောငျးတငျကာ စောငျ့ဆိုငျးနသေော တနင်ျလာနေ့ ညနပေိုငျး သို့ရောကျလာလတေော့သညျ..။
တနင်ျလာနညေ့နေ ရုံးဆငျးတာနဲ့ ကမြလညျး အိမျကို အမွနျပွနျပွီး ရမေိုးခြိုး အဝတျအစားတှေ လဲလှယျဝတျဆငျပွီး နမေိုးနဲ့ ပြျောပါး ဖို့ ထှကျလာခဲ့ပါတယျ.။ နမေိုးအလုပျလုပျတဲ့ နရောကို ၅ နာရီခှဲတိတိမှာ ကမြရောကျတယျ.။ တဈရှိုးစာအတှကျ ကနျြငှကေို ခပြွေီး တာနဲ့ ပြျောပါးမယျ့အခနျးထဲကို တဈခါတညျး တနျးသှားလိုကျတယျ..။ အစတုနျးက လငျးလငျးခငျြးခငျြး ရှိမဲ့ အခနျးတဈခနျးကို ယူ မယျလို့ပဲ စိတျကူးမိပါသေးတယျ..။ ဒါပမေယျ့ ကမြ ဒီမှာလာပွီး အရသာခံတိုငျး အထူးအမှောငျခနျးကိုပဲ ရှေးခယျြ အသုံးပွုခဲ့တာမို့ ၊ အခွားအလငျးရောငျရှိမယျ့ အခနျးတဈခုခု ယူလငျြ ဖီလငျလာသငျ့သလောကျ မလာမှာကို စိုးလို့ပါ..။ ခါတိုငျး ပြျောပါးနကြေ အ မှောငျခနျးကိုပဲ ယူလိုကျတယျ..။ နမေိုးတို့ရဲ့ အလုပျရှငျ မာမီအေးကလညျး ကမြအတှကျ အထူးအမှောငျခနျးကိုပဲ ကွိုတငျဖယျထား စီစဉျပေးထားတာဆိုတော့ အဆငျပွသှေားတာပေါ့ ..။ အမှောငျခနျးဆိုပမေယျ့ လိုအပျရငျ မီးဖှငျ့လို့ရတာပဲ..။ အထဲရောကျတဲ့ အခါ ကွိုကျတဲ့အခြိနျ မီးဖှငျ့နိုငျတယျ..။ မှောငျထဲမှာ ပြျောခငျြရငျလဲ ရတယျ..။ ကဲ…. ဘယျလောကျကောငျးလဲ..။
ကမြဟာ ဒီအထူးအမှောငျခနျးထဲမှာ လာပွီး စပျယှကျပြျောပါးခဲ့တာဟာ အခု ပထမဆုံးအကွိမျ မဟုတျတော့ပါဘူး.။ ခွောကျခါ လောကျကို ရောကျဖူးပွီးပါပွီ ။ အထာကနြပွေီလို့တောငျ ဆိုနိုငျပါတယျ..။ ဒါပမေယျ့ အခုတဈခေါကျလောကျ တဈခါမှ စိတျ လှုပျရှား ရငျဖိုတာမြိုး အရငျက မကွုံခဲ့ရဘူး ။ အိုလေ….ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျလာနကေ့ အမှတျမထငျ နမေိုးလိုးတာခံခဲ့ရ ၊ နမေိုးဟာ အငှါး လငျတဈယောကျအဖွဈ အလုပျလုပျနမှေနျး သိခဲ့ရတဲ့ အခြိနျကစပွီး တဈပတျလုံးလုံးကို ကမြစိတျတှေ အနညျးနညျးအဖုံဖုံ လှုပျရှား နိုးကွှနခေဲ့တာပါ ။ နမေိုးနဲ့ လိုရမှာကို အရမျးတမျးတ လိုလားနခေဲ့တာပါ ။ ဒီနတေ့ော့ အဲဒီတမျးတစိတျတှဟော အပွငျးထနျ အနိုးကွှဆုံးပေါ့ …..။
အမှောငျခနျးထဲကို မဝငျခငျ အဝတျအစားတှေ ခြှတျရတဲ့အခနျးငယျလေးထဲရောကျသှားတာနဲ့ကမြဟာ အရမျးကို စိတျလှုပျရှားလာ ပါပွီ ။ ကမြအဖို့ ကိုယျသိကြှမျးနတေဲ့ ယောကျြားတဈယောကျနဲ့ လိုးရမှာ ဒါပထမဆုံးအကွိမျပါပဲ..။ အရငျက ဒီမှာလာပွီး အငှါးလငျ တှနေဲ့ ပြျောပါး စပျယှကျခဲ့ဖူးပမေယျ့ သူတို့ကို ကမြ လုံးလုံးမသိခဲ့သလို ၊ သူတို့ကလဲ ကမြကို မသိခဲ့ပါဘူး..။ ဒီနလေို့းကွမယျ့ နမေိုး ကတော့ တဈယောကျကို တဈယောကျ ကောငျးကောငျးသိနကွေတယျလေ..။ စိတျလှုပျရှားရမကျထနျတဲ့အခါ ဝွဖဈလရှေိ့တဲ့ အတိုငျးပါပဲ ၊ ကမြပေါငျကွားက စောကျပတျကွီး မို့ဖောငျး အရညျစို ရှမျးအိနသေလို နို့အုံကွီးတှေ တငျးမာပွီး နို့သီးတှေ စူတကျ ကော့ထောငျလို့ နကွေပါပွီ..။
ကမြဟာ ခပျမွနျမွနျပဲ ဝတျထားတဲ့ အဝတျအစားတှကေို ခြှတျခှာခပြဈလိုကျပါတယျ..။ ကမြနို့ကွီးတှဟော အရမျးတငျးမာနတော ကွောငျ့ ရငျဘတျတောငျ ကြိနျးတိနျးတိနျး အေးတေးတေး ဖွဈနပေါတယျ..။ နို့သီခေါငျးဟာလညျး တငျးမာပွီး ကော့ခြှနျထောငျ တကျနတော အောငျ့သလိုလိုတောငျ ရှိနလေရေဲ့ ။ ဟော….အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ခြှတျမယျလုပျတော့ ဘောငျးဘီခှကွား အသား နရောဟာ ကမြရဲ့ စောကျပတျထဲက ယိုစိမျ့ထှကျတဲ့ စောကျရညျကွညျတှနေဲ့ အပွတျကို စိုရှဲနပေါရောလား..။ ရဆှေတျထားတဲ့ အတိုငျးပဲ..။ ကမြဟာ ရှမျးတရုတျကပွားမမို့ စောကျရညျအထှကျမြားပါတယျ..။ ကာမစိတျထနျပွငျးတဲ့အခါတှမှော စောကျရညျ အတျောကို ထှကျပါတယျ..။ ဒါပမေယျ့ အခုလို အတှငျးခံဘောငျးဘီ ခှကွားနရောတဈခုလုံး ( အရညျညှဈယူရငျတောငျ ရနိုငျ လောကျအောငျ) ရှဲရှဲစိုသှားတာမြိုးတော့ မဖွဈသေးပါဘူး..။
အငျး …နမေိုးကတော့ ကမြကို တကယျ နှာထနျရမကျကွှအောငျ လုပျနိုငျတဲ့ ယောကျြားပါပဲ ။ သူလိုးတာတောငျ မခံရသေးဘူး..။ ကမြ အရညျတှေ အရမျးကိုထှကျပွီး ကာမဆိပျလညျး အပွတျကို တကျနပေါပွီ..။ သူနဲ့လိုးကွရရငျတော့ ဘယျလိုမြားနမေယျဆို တာ စဉျးစားကွညျ့ရုံနဲ့ ကွကျသီးမြားတောငျ ထမိပါရဲ့..။ အဝတျအစားတှေ ခြှတျခှာပွီးတာနဲ့ ကမြဟာ အလိုးခံရမယျ့ အမှောငျခနျး ထဲကို အသာပဲ လြှောကျလှမျးဝငျလာခဲ့ပါတယျ..။ ဒီအခနျးထဲမှာ မကွာခငျ ကွုံတှခေံ့စားရတော့မယျ့ ကာမအရသာကို တှေးကွညျ့ ရငျး ဒူးတောငျ မခိုငျခငျြသလို ဖွဈလာရတယျ..။ အခနျးထဲမှာတော့ ဘာမီးမှ မထှနျးထားတာကွောငျ့ ပိနျးပိတျအောငျ မှောငျလို့နပေါ တယျ..။ ဒီအခနျးအထာကို အကြှမျးဝငျပွီးသားမို့ ခုတငျရှိရာကို အလှတျပဲ လြှောကျလှမျး အရောကျသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ..။ ခုတငျ စောငျးမှာ အသာထိုငျရငျး ၊ အခနျးထဲကို လြှောကျလှမျးဝငျလာမယျ့ နမေိုးရဲ့ ခွသေံကို နားစှငျ့နလေိုကျတယျ..။ ကမြရဲ့ ဘယျဖကျ လကျကို ခုတငျဘောငျမှာရှိတဲ့ မီးခလုတျပျေါ အသငျ့တငျထားလိုကျတယျ..။ အခနျးထဲဝငျလာတဲ့ ခွသေံကိုကွားရတာနဲ့ ခလတျုကို နှိပျပွီး မီးဖှငျ့လိုကျမယျ..။ ပွီးတော့ မီးရောငျအောကျမှာ နမေိုးနဲ့ ကမြ အပီပွငျကို ဖိုကျပဈလိုကျမယျ..။
ဒီအပတျတနင်ျလာနမှေ့ာတော့ ကနြျောအလုပျနရောကို ခပျစောစောပဲ အရောကျသှားခဲ့တယျ..။ ရောကျတာနဲ့ မာမီအေးက ကနြေျာ့ အတှကျ အထူးအမှောငျခနျးထဲမှာ လိုးပေးရမယျ့ အလုပျရှိတယျ..။ တဈရှိုးစာအျောဒါလို့ ပွောတာကွောငျ့ ကနြျောလညျး အမှောငျ ခနျးထဲကို အဝငျ ဧညျ့သညျအမြိုးသမီးတှေ အဝတျအစား ခြှတျထားခဲ့ရတဲ့ အခနျးလေးထဲကို ခြောငျးကွညျ့နိုငျတဲ့ ခြောငျးကွညျ့ ပေါကျနားမှာ အသငျ့သှားစောငျ့နတေယျ..။ ဧညျ့သညျမိနျးမ အဝတျခြှတျပွီး အမှောငျခနျးထဲ ရောကျသှားမှ ကနြျောက ဝငျရမှာကိုး..။ ခြောငျးကွညျ့ပေါကျကနေ ခြောငျးကွညျ့လိုကျတော့ လူမတှရေ့ဘူး..။ ဧညျ့သညျမိနျးမ မရောကျသေးဘူး.လေ…။ ဒါကွောငျ့ ကြ နျော အသာပဲ ထိုငျစောငျ့နတေယျ..။ ထိုငျမိလိုကတျယျဆိုရငျပဲ သနျးဝငျး ရောကျလာတယျ..။
ဘယျလိုလဲ..မငျးအမှောငျခနျးထဲမှာ အလုပျလုပျဖို့ ရှိတယဆို.. သနျးဝငျးကမေးလို့ ကနြျော ခေါငျးငွိမျ့ပွလိုကျတယျ..။ ငါတော့ ဒီနေ့ အလုပျမဖွဈသေးဘူးကှ..၊ မငျးကတော့ အခုရောကျ အခုအလုပျဖွဈနဲ့ တယျဟုတျပါလား..၊ မငျးဖိုကျပေးရမဲ့ ဆျောကော ရောကျပွီလား.. စောစောကကွညျ့တုနျးကတော့ မရောကျသေးဘူးကှ… မရောကျဘူးဆိုတာနဲ့ မငျးကထိုငျနရေလားကှာ..၊ အသာ စောငျ့ကွညျ့နပေေါ့..၊ ဒါမှ သူရောကျကိုယျရောကျ အထဲကို ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ ဝငျနိုငျမှာလေ..မှနျး ငါကွညျ့ပေးမယျ.. သနျးဝငျးက ခြောငျးကွညျ့ပေါကျကနေ အသာကွညျ့တယျ..။ ကနြျောကတော့ အသာပဲ ဆကျထိုငျနတေယျ..။ အရငျပတျတုနျးက ဒျေါထား ထားစိုးနဲ့ အပီဖိုကျခဲ့ကွရပုံတှေ ပွနျစဉျးစားမိတယျ..။ ဒီအပတျလညျး ဒျေါထားထားစိုးနဲ့ ပွနျဆုံ၇ရငျကောငျးမှာ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုပွနျ ဆုံဖို့ဆိုတာကလညျး သိပျကိုခကျပါတယျလေ…။
ဟော…လာပီဟေ့….ဟာ…အရငျပတျက မငျးနဲ့ငါ တဈလှညျ့စီ ခပြေးခဲ့ကွတဲ့ ဆျောကွီးပါလားကှ… တောကျမိုကျတယျကာ… အယျ နတောပဲ…ဟီး…. ခဏကွာတော့ ခြောငျးကွညျ့ပေါကျကနေ ခြောငျးကွညျ့နတေဲ့ သနျးဝငျးရဲ့ အံတကွိတျကွတိနဲ့ ပွောလိုကျတဲ့ စကားသံကို ကွားရတယျ..။ ကနြေျာ့ရငျထဲ အတျောကို လှုပျလှုပျရှားရှား ဖွဈသှားတယျ..။ ဒါဟာ တကယျပဲလား..။ အခု ကနြျော အထူးအမှောငျခနျးထဲမှာ လိုးပေးရမယျ့ ဧညျ့သညျအမြိုးသမီးက ဒျေါထားထားစိုးပဲလား..။ သနျးဝငျးဆိုတဲ့ကောငျက လူနောကျ..။ သူပွောတာ အတညျယူလို့ ရတာမဟုတျဘူး..။ ဒါကွောငျ့သူ့ကို အသာတှနျးဖယျပွီး ခြောငျးကွညျ့ပေါကျကနေ ခြောငျးကွညျ့လိုကျ တဲ့ အခြိနျမှာ ဒျေါထားထားစိုးဟာ အဝတျအစားတှေ အကုနျလုံး ခြှတျပဈလို့ ဗလာကိုယျလုံးတီးဖွဈနပေါပွီ…။ မို့ထှားတဲ့ ရငျသား ဆိုငျကွီးတှေ ၊ ကားအိတဲ့ တငျသားကွိးတှေ..၊ တုတျဖွိုးတဲ့ ပေါငျတနျဖွူဖွူဖှေးဖှေးတှေ ၊ အိုး…မွငျရတဲ့ ကိုယလျုံးကိုယျပေါကျ အခြိုးအဆကျတှကေတော့ အားပါးပါးလို့ ပွောရအောငျကို စိုပွထှေားကွိုငျးလှပါတယျ..။ ဟော….ဒျေါထားထားစိုး ကိုယျလုံးတီး ကွီးနဲ့ အထူးအမှောငျ ခနျးထဲကို လှမျးဝငျသှားပွီး ကနြျောဝငျလိုကျသှားဖို့ပဲ ကနျြတော့တယျ..။ အထဲရောကျရငျ …၊ ဟား… တှေး လိုကျတာနဲ့တောငျ ဖီလငျတှေ အရမျးရလာပွီ..။
ဟိုဆျောကွီးပဲကှ…ဒါကွီး ဖွူဖွူတောငျ့တောငျ့၊ နှာကလညျး ထနျထနျနဲ့ လိုးရတာ ဂှတျရှယျပဲကှ.. ကိုငျးဟေ့..ဒီတဈပတျလညျး ဟို အရငျပတျတုနျးကလို မငျးတဈလှညျ့ ငါတဈလှညျ့ ဖိုကျကွရအောငျကှာ.. မငျးအခု အရငျသှားဆျောနှငျ့.. ငါမာမီအေးကို သှားပွောပွီး တဈလှညျ့ဝငျခမြယျ ဟုတျလား.. ကနြျော ခြောငျးကွညျ့ပေါကျကနေ မကျြလုံးခှာလိုကျတော့ သနျးဝငျးက ပွောတယျ.။ ကှိုငျပဲ ဗြာ..။ ကနြျော ဒျေါထားထားစိုးကို တဈရှိုးစာ ( ၃ နာရီ ) အခြိနျ အကုနျလုံးကို အပွတျ လိုးပဈခငျြတာ..။ အခု သနျးဝငျးက တဈလှညျ့ ဝငျဖိုကျမယျ ဆိုတော့ အခကျပဲ..။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ သနျးဝငျးကို တဈလှညျ့ပေးလိုစိတျ မရှိဘူး..။ ဒါပမေယျ့ အပွတျ ငွငျးပဈလိုကျ ဖို့ကလဲ မသငျ့ဘူးလေ..။ အရငျအပတျတုနျးက သူ့အတှကျ လိုးရမယျ့အလုပျမှာ ကနြေျာ့ကို အစားဝငျပေးဖို့ ချေါခဲ့တာကွောငျ့ ဒျေါ ထားထားစိုးကို လိုးခဲ့ရတာ မဟုတျလား..။ သူ့ကဇြေူးရှိတယျလေ. ။ ကနြေျာ့အလှညျ့ကတြော့ ကပျလို့ မဖွဈဘူး…။ ဒါကွောငျ့ မငွိမျ့ ခငျြငွိမျ့ခငျြနဲ့ ခေါငျးငွိမျ့လိုကျရတယျ ..။ သနျးဝငျးလညျး ခပျမွူးမွူးပဲ လြှောကျလှမျးထှကျသှားတယျ..။ သူ့ကွညျ့ရတာ ဒျေါထား ထားစိုးကို လိုးရတာ သိပျသဘောကနြပေုံပဲ ..။ ဟုတျမှာပါပဲလေ…။ ဒျေါထားထားစိုးလို ရုပျကလဲ ခြော ၊ ငယျကလညျး ငယျ.. လုံးကွီးပေါကျလှ ဖွူဖွူတောငျ့တောငျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျကို လိုးရတာ ဘယျယောကျြား မကွိုကျပဲ နမှောလဲ..။ ကနြေျာ့ကိုပဲ ကွညျ့လေ…. ဒီမိနျးမကို မွငျရကတညျးကကို လိုးခငျြနခေဲ့တာ ။
သနျးဝငျးထှကျသှားတော့ ကနြျောလညျး အဝတျအစားတှေ အမွနျဆုံးခြှတျပွီး အထူးအမှောငျခနျးထဲကို ခကျြခငျြးပဲ လှမျးဝငျလိုကျပါ တော့တယျ..။ အခနျးထဲမှာ မှောငျမဲနတောဆိုတော့ ဘာမှ မမွငျရပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ အခနျးထဲက ခုတငျပျေါမှာ ဒျေါထားထားစိုး ကိုယျတုံးလုံးကွီးနဲ့ ရှိနမေယျဆိုတာ ကိုတော့ ကနြျော သိနတေယျလေ ။ ဝတလျဈစလဈ ကိုယျလုံးကွီး မကွာခငျ ကနြေျာ့ရငျခှငျထဲ ရောကျတော့မှာ မဟုတျလား ။ နို့ကွီးတှကေို အပီကို ဆှဲပဈလိုကျမယျ ။ စောကျပတျကွီးကိုရော ၊ ဖငျပေါကျကိုပါ အပွတျကို လိုး ပဈလိုကျမယျ..။ ကနြျောဟာ ခုတငျရှိရာကို ခွလှေမျး ကွဲကွဲနဲ့ အမွနျဆုံးရောကျအောငျ လြှောကျလှမျး ခညျြးကပျသှားပါတယျ..။ ခွသေုံးလှမျးပွညျ့အောငျတောငျ မလှမျးရသေးဘူး ။ ခြောကျ ခနဲ ခပျတိုးတိုးအသံကလေးနဲ့ အတူ အခနျးထဲမှာ မီးထိနျထိနျလငျးလို့ သှားပါတယျ..။
ရုတျတရကျ မမြှျောလငျ့ပဲ မီးရောငျ လငျးထိနျလာတာကွောငျ့ ကနြျော ခွလှေမျးတုံ့ ရပျသှားတယျ..။ မှောငျမဲနတေဲ့ နရောမှာ မီး ရောငျလငျးထိနျလာတာမို့ ကနြေျာ့ မကျြလုံးတှလေညျး ပွာဝွပေီး ခကျြခငျြး ဘာကိုမှ သဲသဲကှဲကှဲ မမွငျနိုငျသေးဘူး..။ မကျြတောငျ ကို လေးငါးခကျြလောကျ ပုတျခတျပုတျခတျ လုပျလိုကျတော့မှ အလငျးရောငျမှာ အသားကပြွီး မွငျနိုငျတှနေို့ငျလာပါတော့တယျ…။
ကမြဟာ မကျြစတှေ့ကေို စုံမှိတျပွီး ရမကျထနျ စိတျလှုပျရှားစှာပဲ အမှောငျခနျးထဲက ခုတငျစောငျးမှာ အသာထိုငျရငျး အထဲကို ဝငျ လာမညျ့ နမေိုးရဲ့ ခွသေံကို စောငျ့လငျ့နတေယျ..။ မှောငျနရောက ရုတျတရကျကွီး မီးလငျးထိနျသှားရငျ မကျြစတှေ့ေ ပွာဝွပေီး မသဲ မကှဲဖွဈသှားမှာကို ကွိုတငျပွငျဆငျ ကာကှယျတဲ့ အနနေဲ့ မကျြလုံးတှကေို မှိတျထားတာ ။ နမေိုးဟာ ကိုယျတုံးလုံးခြှတျပွီး လီးခြောငျးကွီး အတောငျသားနဲ့ ဒီအခနျးထဲ ဝငျလာမှာကို ကမြသိတယျလေ..။ မီးဖှငျ့လိုကျလို့ အလငျးရောငျ လငျးထိနျလာတာနဲ့ သူ့ တဈကိုယျလုံးကို ကကြနြန ပီပီပွငျပွငျ မွငျခငျြကွညျ့ခငျြလို့ ခုလိုလုပျထားတာ..။ အရငျအပတျတုနျးက သူနဲ့ ဝကျဝကျကှဲအောငျ လိုး ခဲ့ရပွီးပွီဖွဈပမေဲ့ သူ့တဈကိုယျလုံးကို ကမြ သသေခြောခြာ မကွညျ့ရသေးဘူး..။ ဒီနတေ့ော့ အားရအောငျ ကွညျ့မယျ ။ စိတျကွိုကျ လညျး အီစိမျ့နအေောငျ အလိုးခံမယျ..။
ဟော….။ အထဲကို ဝငျလာတဲ့ ခွသေံကွားရပါပွီ ။ ခွသေံကွားရတယျဆိုတာနဲ့ ကမြလညျး အသငျ့လကျတငျထားတဲ့ မီးခလုတျကို ဆတျခနဲ ဖိပွီး ဖှငျ့လိုကျတယျ….။ ခြောကျ.. မီးခလုတျဖှငျ့လိုကျတဲ့ အသံပျေါလာတာနဲ့ ကမြလညျး မှေးမှိတျထားတဲ့ မကျြလုံးတှေ ကို အသာပဲ ဖှငျ့လိုကျတယျ..။ ဟော…. နမေိုးတဈယောကျ ခုတငျနဲ့ ခွလှေမျး သုံးလေးလှမျးလောကျအကှာမှာ ကယိုလုံးတီးနဲ့ မတျတတျရပျလကျြကွီး ရှိနတော ကောငျးကောငျးကွီး မွငျရပါပွီ ။ ကမြ မကျြလုံးတှဟောလညျး ခကျြခငျြးပဲ သူ့ပေါငျကွားက လီးခြောငျးကွီးဆီကို ရောကျသှားတယျ ။ အငျး….သူ့တဈကိုယျလုံးမှာ ကမြကို အဆှဲဆောငျနိုငျဆုံးက အဲဒီ လီးကွီးပဲ မဟုတျလား..။ အမယျလေး…လေး….၊ တကယျ့ကို ကွီးတဲ့ လီးကွီးပါပဲ..ရှငျ…၊ အားလညျး အားရစရာကွီး…။
ကမြ စိတျအထငျတော့ လီးခြောငျးကွီးရဲ့ အရှညျက ရှဈလကျမ ကြျောကြျောလောကျကို ရှညျမလားပဲ…။ လုံးပတျကတော့ ကပျြလုံး ထကျတောငျ ပိုတုတျသေးတယျ…။ အသညျးယားစရာ အကောငျးဆုံးကတော့ လီးထိပျဘကျပိုငျးက ဒဈပွဲကွီးပါပဲ…။ အရပွေား လှီးဖွတျထားတာကွောငျ့ ဒဈကွီးဟာ အျောလနျကွီးလို ပွဲအာလနျနတေယျ…။ လီးဒဈရဲ့ အရှညျကလညျး သုံးလကျမနညျးပါး ရှိတာ ကလား..။ နီရဲ ပွဲအာလနျနတေဲ့ ဒဈကွီးဟာ မီးရောငျအောကျမှာ လကျလကျတောကျပွောငျလို့ …။ ပွီးတော့ ဘယျလိုအကွောငျး ကွောငျ့မှနျးတော့ မသိပါဘူး..၊ သူ့ ငပဲကွီးက ငေါ့ခနဲ ငေါ့ခနဲ လှုပျခါနသေေးတယျ..။ ကမြကို လီးတော့ပွီး နှုတျခှနျးဆကျစကား ပွောနတေဲ့ အသှငျမြိုး…။ အငျး…သူ့လီးခြောငျးကွီးဟာ ကမြရဲ့ အသှေးအသားတှနေဲ့ ထိတှရေ့ငျးနှီးပွီးသားမို့ အခုလညျး ထပျပွီး စားခငျြလို့ ငေါ့ ငေါ့ပွနတော ထငျပါရဲ့..။ သူကတော့ ကမြကို ခကျြခငျြး မွငျပုံမရဘူး..။ ရုတျတရကျ လငျးထိနျလာတဲ့ မီးရောငျမှာ မကျြစေ့ ကငျြ့သားမရပဲ ပွာဝနေပေုံပါပဲ..။ ဒါကွောငျ့ ကမြက ထိုငျနရောက ထပွီး သူ့ကို လကျတှဲချေါလိုကျရတယျ..။
လာ….ဒီမှာ… လကျတဈဘကျနဲ့ သူ့ ကိုဆှဲချေါလာရငျး ကနျြတဲ့လကျတဈဖကျနဲ့ သူ့ပေါငျခှကွားက မတျတောငျနတေဲ့ လီးခြောငျး တုတျတုတျကွီးကို ဆုပျကိုငျဆှဲကလိမိတယျ…။ လီးကွီးက ရှညျရုံ ကွီးရုံတငျမဟုတျဘူး..။ မာတာလညျး အပွတျကို မာနတောပဲ..။ ဒါကွောငျ့လညျး အရငျအပတျတုနျးက သူလိုးတာခံရငျး ကမြ ကာမအရသာတှေ ကောငျးကောငျးခံစားခဲ့ရတာပေါ့….။ အခုလညျး အဲဒီ ဖီလငျမြိုး ခံရအုနျးတော့မယျ…။ ကမြလေ အရမျးကို နှာထနျနပေါပွီ…ရှငျ…။ ဒါကွောငျ့ ခုတငျနားရောကျတာနဲ့ သူ့ကို ခကျြခငျြးပဲ ခုတငျပျေါ တှနျးလှဲခလြိုကျတယျ..။ သူ ခုတငျပျေါ ပကလျကျလနျကသြှားတာနဲ့ ကမြလညျး ခကျြခငျြးပဲ သူ့ ဘေးမှာ ဒူး တုတျခပြွီး လီးခြောငျးကွီးကို ကုနျးစုပျလိုကျတော့တာပါပဲ…။ ကမြဟာ အငှါးလငျတှနေဲ့ ကာမစပျယှကျ အပြျောကြူးလှနျခဲ့ပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ လီးတှကေိုတော့ စုပျမပေးခဲ့ပါဘူး..။ နမေိုးရဲ့ လီးကိုပဲ စုတျခဲ့တာ..။ ပွီးတော့ အဲဒီလို စုပျခဲ့ရတာကိုလညျး အရမျးကို ဖီလငျရ နတော…။
ဒါကွောငျ့ ဒီနမှေ့ာတော့ သူ့အနနေဲ့ အထှအေထူး ပွောဆိုဆှဲဆောငျနစေရာကို မလိုတော့ပဲ လီးကို မွငျရတာနဲ့ ကုနျးစုပျပေးလိုကျမိ တာပါပဲ….။ ဘယျလောကျမြား အာသာငမျးငမျးနဲ့ အစုပျကွမျးသလဲ ဆိုရငျ သူ့လီးကွီး တဈခြောငျးလုံး ကမြပါးစပျထဲ တဈခါတညျး အကုနျလုံးဝငျအောငျကို သှငျးယူစုပျပဈလိုကျတာ..။ ကမြရဲ့ လငျတျောမောငျ မနှဈက သငျပေးထားလို့ ကမြ လီးကောငျးကောငျး စုပျ တတျပါတယျ…။ ဒါကွောငျ့လညျး သူ့ရဲ့ လီးတနျရှညျရှညျကွီးတဈခြောငျးလုံး ပါးစပျထဲ အကုနျဝငျအောငျ စုပျပေးတတျတာပေါ့..။ လီးမစုပျတတျတဲ့ မိနျးမဆိုရငျ ဘယျဒီလို လီးအကုနျဝငျအောငျ စုပျနိုငျပါ့မလဲ …ရှငျ…။ သူ့လီးဒဈပွဲကွီးဆိုတာ ကမြရဲ့ အာခေါငျကို ကြျောပွီး လညျခြောငျးထဲအထိ တနငျ့တပိုးကို ရောကျနတော…။
အားပါးပါး…ဟုတျပွီ စုပျစမျးပါ..၊ ကနြေျာ့လီးကို ကောငျးကောငျးစုပျပေးပါ…၊ မမ စောကျပတျကိုလညျး ကနြျော အပီ ရကျပေး မယျ….. အား….ရှီး…. ဟုတျပွီ…အဲဒီလို လြှာလေးနဲ့လညျး ကလိပေးတာ သိပျမိုကျတာပဲဗြာ…၊ ..မမက လီးစုပျ အရမျးကြှမျးတာ ပဲ..ကိုး…. ကမြ အားရပါးရ စုပျပေးတာကွောငျ့ နမေိုးဟာ အံတကွိတျကွိတျနဲ့ လူးလှနျ့နပေါတယျ..။ လီးကို စုပျရငျး ဒဈတဈဝိုကျဆို ရငျ နမြေိုးဟာ တှနျ့ခနဲ တှနျ့ခနဲကို ဖွဈသှားတာပဲ..။ ဂှေးဥကို လညျး ကိုငျဆော့ပေးပါအုနျး မမရယျ..၊ လီးစုပျပေးရငျး ဂှေးဥကို ကိုငျ ပှတျပေးတာ သိပျခံလို့ ကောငျးလှနျးလို့ပါ.. နမေိုးက တောငျးဆိုလာတယျ..။ သူ့ ကို ကမြက ပိုကျဆံပေးချေါထားတာ ဖွဈပမေယျ့ လိုးကွတဲ့အခါမှာ ယောကျြားစစေားတာကို မိနျးမက လိုကျလုပျပေးရတာက သဘာဝပဲ မဟုတျလား..။ ဒါကွောငျ့ သူခိုငျးသလို ကမြ လုပျပေးလိုကျပါတယျ..။ ကမြကိုယျတိုငျကလညျး သူ့ကို ဖီလငျတကျ စိတျထျကွှအောငျ လုပျပေးနနေိုငျတာကိုး…။ လီးကို ပါးစပျနဲ့ စုပျပေးရငျး သူ့ဂှေးဥတှကေို လကျနဲ့ကိုငျပွီး ဖှဖှလေး ပှတျပေးတယျ..။ အသာပငျ့မွှောကျပေးလိုကျသေးတယျ..။ သူ့ဂှေးဥ တှကေ တှဲလညျး မတှဲဘူး ၊ အပျေါတကျပွီးတော့လညျး ကပျမနဘေူး..။ မတှဲပဲ လုံးလုံးကဈြကဈြလေးနဲ့ ပှတျလို့ကိုငျလို့ အဆငျပွရေုံ ပဲ..။ ကမြက လီးစုပျ ၊ ဂှေးဥကိုငျ လုပျပေးနတေုနျး သူက ကမြ ပေါငျကွားကို လကျလှမျးပွီး စောကျပတျကို ကိုငျပှတျတယျ..။
အို….စောကျပတျတငျ မဟုတျပါဘူး..။ စအိုပေါကျကိုလညျး မထိတထိ လှမျးကလိနသေေးတယျ..။ ဒီလို အကလိခံရတော့ ကမြ စောကျပတျထဲက ယားလာတယျ..။ ဖငျထဲကလဲ ယားလာတယျ..။ ကမြဟာ စိတျထထနဲ့ ပါးစပျထဲမှာရှိနတေဲ့ သူ့လီးခြောငျးကွီးကို မဲပွီး အပီအပွငျကို စုပျပဈလိုကျမိတယျ..။သူက စောကျပတျကို ပှတျနရောကနေ လကျနဲ့ညှပျပွီး ညှဈဆှဲလိုကျသေးတယျ..။ ကမြ အဖုတျဟာ စိတျထနခြေိနျဆိုတော့ လထေိုးထားသလိုကို ဖူးရှ ဖောငျးကွှတကျနတောကလား..ရှငျ..။ ညပျပွီး ညှဈဆှဲလိုကျတဲ့ သူ့ လကျခြောငျးတှအေကွားမှာ ကမြစောကျပတျနှုတျခမျးသား တဈဖကျဟာ တဈတဈပွီး ညှပျပါသှားတာ ဘယျလိုခံလို့ကောငျးမှနျး မ သိပါဘူး…။ ပါးစပျနဲ့ စုပျပေးနလေို့ မတျတောငျ မာကွောနတေဲ့ လီးခြောငျးကွီးနဲ့ လိုးတာကို ခံခငျြလာပါပွီ…။ လီးစုပျလို့ ကောငျးလှ ပမေယျ့ ဒီလီးနဲ့ လိုးတာ ခံရရငျ ဒီထကျပိုကောငျးမှာကို နားလညျတာကွောငျ့ လီးအပီအပွငျ ဆကျပွီးစုပျပေးခငျြသေးတဲ့ အာသာ တှကေို ထိနျးခြုပျပွီး လီးအစုပျရပျလိုကျပါတယျ..။ ကမြပါးစပျထဲက သူ့လီးခြောငျးကွီးကိုလညျး မထုတျခငျြထတျုခငျြနဲ့ ထုတျပေး လိုကျရပါတယျ..။
လီးကို အစုပျကွမျးလို့ သူ့စိတျမထိနျးနိုငျတော့ပဲ သုတျရညျတှေ ထှကျကုနျမှာကိုလညျး ကမြက မလိုလားဘူးလေ..။ သတျုထှကျသှား တယျဆိုရငျ ဘာပွောပွော သူ့လီးကတော့ အခုလောကျ ဘယျမာတောငျနတေော့မှာလညျး..။ ကမြကိုလညျး ခကျြခငျြး ဘယျလိုးနိုငျ မှာလညျး..။ အခြိနျနညျးနညျးလောကျဖွဈဖွဈတော့ သူ့လီးကို အနားပေးရအုနျးမှာပေါ့..ရှငျ..။ ဒါမြိုး မဖွဈခငျြလို့ လီးအစုပျကို ရပျ လိုကျတာပါ..။ ဆကျတော့ စုပျခငျြသေးတယျ..ရှငျ့…။ လီးစုပျလို့ ၀ သှားပွီလား….မမ ပါးစပျထဲက လီးကြှတျသှားတဲ့အခါ သူက မေးတယျ..။ ကမြရဲ့ စောကျပတျထဲကိုလညျး လကျခြောငျးတဈခြောငျး ဆတျခနဲ ထိုးထညျ့လိုကျတာကွောငျ့ ကမြဖွငျ့ ရငျတောငျ တုနျသှားရတယျ..။ အို ဟငျ့……ဝတော့ ဘယျဝ အုနျးမလဲ..၊ စုပျရတာ သိပျကောငျးတာပဲ..၊ ဒါပမေယျ့ အခုတော့ ခနရပျလိုကျအုနျး မယျ..၊ နောကျလုပျစရာတှေ လုပျရအုနျးမယျ မဟုတျလား… ကမြက သူ့ကို မကျြစလေးခြီပွီး ပွောလိုကျတယျ..။ ဒီလို ရငျးရငျးနှီးနှီး ဖွဆေလိုကျရတာကလညျး အရသာတဈမြိုးပါပဲ…။
ဒါဆို…ပကျလကျအိပျလိုကျ….. တကျခတြော့မလို့လား….ဟငျ. မခသြေးပါဘူး…. ကမြလညျး သူပွောသလို ပကျလကလျှနျပွီး ခကျြခငျြးအိပျပေးလိုကျတယျ..။ သူက တကျမခသြေးဘူးဆိုတော့ ကမြအဖုတျကို ရပျပေးဖို့ ပကျလကျ အိပျခိုငျးတာမှနျး နားလညျပါ တယျ..။ ကမြကလညျး ဒီလို အဖုတျရကျပေးတာကို သိပျကို ကွိုကျပေါ့.ရှငျ…။ ဒီလို အဖုတျရကျခံရတဲ့ ဖီလငျကို ကွိုကျလို့လညျး အငှါးလငျတှနေဲ့ ပိုကျဆံအကုနျခံပွီး ကာမစပျယှကျ ပြျောပါးနတောပေါ့…။ ဒါကွောငျ့ ပကျလကျလှနျရုံတငျ မဟုတျဘူး…၊ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကိုပါ ခပျကားကား အသငျ့လုပျပေးလိုကျတယျ..။ သူလညျး ကားသှားတဲ့ ကမြပေါငျကွားကို မကျြနှာအပျခြ လိုကျတယျ..။ သူ့ ပါးစပျနဲ့ ကမြ စောကျပတျ စပွီးထိမိတယျဆိုတာနဲ့ ကမြတဈကိုယျလုံး ပှကျပှကျဆူပွီး ကွကျသီးတဖွနျးဖွနျးထ သှားစလေောကျတဲ့ အတှထေူ့း အရသာကို စတငျခံစားရတော့တာပါပဲ…။ ဒါကွောငျ့ သူ့ ခေါငျးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ လှမျးအုပျကိုငျပွီး အဖုတျပျေါ မကျြနှာ ပိုကပျမိအောငျ ဆှဲကပျပေးလိုကျတယျ..။ သကူ လြှာထုတျပွီး ၊ ကမြစောကျပတျကို တပပျြပပျြမွညျအောငျ ကို မရှံမရှာ ရကျပေးပါတော့တယျ..။ ကမြဆိုတာ ကော့ပြံလနျတကျသှားရတဲ့ အထိ ဖီလငျတှေ တကျလာရတော့တာပါပဲ…ရှငျ…။
အားပါးပါး…ရှီး…ကောငျးလိုကျတာကှာ…ရကျပေး..ရကျလေ..၊ ဟငျ့ဟငျ့..စောကျခေါငျးထဲကို ဝငျအောငျ ထိုးရကျပေးစမျးပါ…၊ အမ လေးလေး…အား အား..အီး..အားအား ရှီး..အား. ဒီတော့သူက အဖုတျအကှဲကွောငျးကို အလြားလိုကျ ရကျပေးနရောက လြှာကို ဆနျ့ ထုတျပွီး စောကျခေါငျးထဲ ထိုးထညျ့တယျ..။ အပေါကျရှာရ ခကျနလေို့လား ၊ ဒါမှမဟုတျ ကမြကို မရိုးမရှဖွဈအောငျ တမငျလုပျ ခငျြလို့လားတော့ မပွောတတျဘူး..။ သူ့ လြှာက စောကျခေါငျးထဲကို ကကြနြန မဝငျဘူး..ရှငျ့…။ လြှာဖြားလေးသာ ဝငျလိုကျထှကျ လိုကျ တဈပွူတဈပွူ ဖွဈနတေယျ…။ ဘယျလောကျ အနရေခကျမယျဆိုတာ စဉျးစားသာကွညျ့ပါတော့..ရှငျ..။ ကမြ ဘယျနနေိုငျ တော့ မှာလဲ…၊ စိုစိုစှတျစှတျ လြှာဖြားလေးနဲ့ စောကျခေါငျးထဲ မဝငျ့တဝငျ တဈပွူတဈပွူ ရကျထိုး ကလိပေးတာ ခံနရေတဲ့ ဟာ ပဲ…။
ပွီးတော့ စောစောက သူ့လီးကွီးကို စုပျပေးခဲ့ရလို့ ရမကျထနျဖီလငျတကျနတေဲ့ အရှိနျနဲ့လညျး ပေါငျးပွီး ကမြဟာ ပွီး လုလု အနအေထားကိုတောငျ ရောကျနပွေီ..။ အာသာရမကျတှကေ သိပျကိုပွငျးထနျနတောကွောငျ့ ကမြဟာ ကာမအရသာကလှဲလို့ အခွားဘာကိုမှ စိတျထဲ မထားနိုငျတော့ဘူး..။ ဒါကွောငျ့ သူရကျပေးကလိပေးနတေဲ့ ကမြစောကျပတျကို ကမြကိုယျတိုငျပဲ လကျနှဈ ဖကျနဲ့ ကိုငျပွီး ကကြနြန ဆှဲဖွဲပေးလိုကျပါတယျ…။ အဖုတျဖွဲပေးလိုကျလို့ ဟပွဲပွဲဖွဈပွီး ကမြရဲ့ စောကျခေါငျးပေါကျကလညျး အထငျးသားပျေါသှားတာပေါ့…။ သူ့အဖို့ လှဲခြျောနစေရာ အကွောငျးမရှိတော့ပါဘူး..။ လြှာထိုးထညျ့စရာလညျး မခကျတော့ဘူး ပေါ့…။
ဟငျ့ဟငျ့….အခေါငျးထဲကို လြှာထိုးကလိရကျပေးလေ..၊ လုပျစမျးပါ……. ယား….အရမျးယားနပွေီ.. ထိုးစမျးပါ..ရှငျရယျ… ပါးစပျ ကလညျး အငမျးမရ ပွောဆိုတောငျးခံမိတယျ.။ ဒီတော့မှ ကိုယျတျောခြောက သူ့လြှာကို ကမြစောကျခေါငျးထဲ လြောခနဲဆို ထိုး ထညျ့လိုကျပါတယျ..။ အောငျမလေးလေး…. ကောငျးခကျြကတော့ ပွောမပွတတျအောငျပါပဲ…။ ကမြရဲ့ ဖငျကွီးဆိုတာ မှရေ့ာပျေါ ကနေ တဈထှာလောကျ ကွှတကျသှားအောငျကို ကော့တကျသှားတာ..။ သကူ ကမြရဲ့ ကားအိတငျးမောကျနတေဲ့ တငျသားခွမျးကွီး နှဈခုကို သူ့လကျဝါးကွီးတှနေဲ့ မိမိရရ ဆုပျကိုငျ ဖဈြညှဈပွီး လြှာကို စောကျခေါငျးထဲ ခပျသှကျသှကျ ခပျမွနျမွနျ ထိုးသှငျး လှုပျရှား ပေးတယျ..။ စောကျစကေို့ သူ့နှုတျခမျးကွီးနဲ့ ညှပျပွီး စုပျပေးသေးတယျ..။ စောကျခေါငျးထဲ လြှာကို ထိုးသှငျးပွနျထုတျ လုပျရငျး စောကျစကေို့ပါ စုပျပေးတာမြိုးပေါ့..ရှငျ..။
သူမို့ လုပျတတျတယျရှငျ..။ တကယျကို မိနျးကလေးတဈယောကျ ကာမအရသာတှပွေီ့း ဖီလငျအပွတျတကျအောငျ ကြှမျး ကြှမျးကငျြကငျြ လုပျတတျတဲ့ လူပါပဲ..။ ဘယျလိုကနမြေား ဒီလောကျ ပညာစုံအောငျ တတျနတောပါလိမျ့…။ တဈခြီခပြွီး ခဏနား တုနျးကမြှ မေးကွညျ့အုနျးမယျ…။ အခုလောလောဆယျမှာတော့ သူကလိပေးနတောတှကေ ထိမိလှနျးတာမို့ ကမြဟာ ရငျဖိုလှိုကျ မော သှေးဆူရှိနျမွသော အရသာဖီလငျတှေ တနငျ့တပိုးကွီး ခံစားရတာကွောငျ့ တဈကယိုလုံး တကျတကျတုနျခါပွီး ကာမအရသာ အထှတျအထိပျကို တကျလှမျး ရောကျရှိသှားပါတယျ…၊ တဈခါ ပွီးသှားခဲ့ရပါပွီ…ရှငျ…။ အား..အား…ကောငျးလိုကျတာကှာ…မငျး အဖုတျရကျပေးတာ… သိပျကိုမိုကျတာပဲ….. အမလေး.လေး.. မနနေိုငျတော့ဘူး… အား.. အရမျးယားနပွေီ… အား အား… ထှကျကုနျ ပွီ… အမလေး.. လေး..စောကျပတျထဲက အရညျတှေ ထှကျကုနျပွီ… အား အား အီး အိ..အီး…. ကောငျးလိုကျတာ….ကောငျး….လိုကျ..အား.. အား…အား…
ပွီးသှားတာမှ တကယျ့ကို ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ပွီးသှားရတာ…၊ ကမြ စောကျပတျထဲက ပွီးလို့ ထှကျကတြဲ့ စောကျရညျကွညျ တှဆေိုတာ မြားမှ မြားပဲ..။ တပှကျပှကျ ကို ထှကျကနြတော..။ သူက အဲဒီ အရညျကွညျ ပဈြခြှဲခြှဲတှကေို ရှူးခနဲ ရှူးခနဲ စုပျမြိုယူပွီး တဂှပျဂှပျ နအေောငျ သောကျခနြတေယျ..။ ပွီးတော့ ကမြစောကျပတျကို လြှာနဲ့ ပွောငျစငျသှားအောငျ ဝဝေို့ကျ လကျြပေးသေး တယျ..။ ကမြဟာ ခွပေဈလကျပဈ လဲလြောငျးရငျး ဖီလငျဆကျယူနမေိတယျ..။ မမ..ပွီးသှားပွီ မဟုတလျား… အားရအောငျ ရကျ ပေးပွီးမှ ကမြပေါငျကွားက ခေါငျးခှာပွီး မေးတယျ..။ အေးကှာ…မငျးက လိုးတောငျ မလိုးရသေးဘူး…၊ စောကျပတျရကျပေးရုံနဲ့ ကို ပွီးသှားရတာ..၊ ကဲ မငျးလိုခငျြတယျ ဆိုရငျ လိုးလေ…ထားခံမယျ… တဈခြီပွီးသှားတယျ ဆိုပမေယျ့ သူ့လီးကွီးနဲ့ လိုးတာမခံရ သေးတဲ့ အတှကျ ကမြ သိပျအားမရနိုငျသေးပါဘူး..။ ဒါကွောငျ့ ပွောလိုကျတာ..။ သကူလညျးး သူပါပဲ..။ အထာပေါကျတာပေါ့..။
မမ ခံခငျြတယျဆိုရငျတော့ လိုးပေးရမှာပေါ့…. အံမယျ..သူကတော့ မလိုးခငျြတဲ့ အတိုငျးပဲ..၊ ကဲ..ဘယျလိုခခြငျြလဲ ပွော…. မမ နညျးနညျး မောနသေေးတယျ မဟုတျလား… ဒီတော့ အရငျဆုံး အပျေါကနပေဲ တကျခှပွီး လိုးမယျ.. ..ကွိုကျလား…. အငျး….လုပျ လေ…လာ တကျ.. ကမြက ခေါငျးလေးငွိမျ့ သဘောတူလိုကျတော့ သူလညျး ပကျလကျစငျးစငျးလေးရှိနတေဲ့ ကမြကိုယျပျေါ အလိုကျသငျ့ တကျခှပါတော့တယျ…။ ပကျလကျစငျးစငျးလေးနဲ့ ပေါငျကွီးတှေ ခပျကားကား အိပျနတေဲ့ ဒျေါထားထားစိုး ကိုယျပျေါ တကျခှလိုကျပွိးတာနဲ့ ကနြျောက သူ့နှုတျခမျး ဖူးဖူးလေး အစုံကို ဖိကပျနမျးစုပျပေးလိုကျတယျ..။ သူ့အဖုတျကို ခုနလေးတငျ က ရကျ ပေးထားခဲ့တာကွောငျ့ ကနြေျာ့ပါးစပျမှာ သူ့စောကျပတျနံ့တှေ သငျးနတေယျ..။ ဒီလို နှုတျခမျးခငျြး တကေ့ပျ စုပျပေးလိုကျတဲ့အခါ အဖုတျနံ့ကို သူမ ပွနျခံစားရမှာပါ..။ ဒါလညျး ကနြျောတို့ အငှါးလငျတှရေဲ့ နညျးပရိယာယျ တဈခုပေါ့..။
စောကျပတျရကျထားပွီးတဲ့ ပါးစပျနဲ့ ကာယကံရှငျ မိနျးမကို နှုတျခမျးစုပျပေးပွီး သူ့ အဖုတျနံ့ သူပွနျရအောငျ သူ့အဖုတျကထှကျတဲ့ အရညျကွညျတှေ သူပွနျလြှာနဲ့ ထိမိရကျမိအောငျ လုပျပေးရငျ အဲဒီမိနျးမရဲ့ သှေးသားတှေ တဈမြိုးတဈမညျ နိုးကွှ ရမကျထနျလာ တယျ..။ စှဲစှဲမကျမကျလညျး ဖွဈတတျတယျ..။ ပါးစပျခငျြးတကေ့ပျပွီး ခပျမြှငျးမြှငျး စုပျယူရငျး ဒျေါထားထားစိုးရဲ့ မို့ထှားတဲ့ နို့အုံ ကွီးတှကေို တဈလှညျ့စီ ဆုပျနယျပေးသေးတယျ..။ ကော့ထောငျတကျနတေဲ့ နို့သီးတှကေိုလညျး ဖဈြညှဈ ဆှဲဆိတျပေးတယျ..။ ဒါ တငျ ဘယဟျုတျမှာလဲ..။ မတျတောငျနတေဲ့ ကနြေျာ့လီးကွီးနဲ့လညျး သူမပေါငျကွားက စောကျပတျကွီးကို ထိလိုကျ ထိုးလိုကျ ပှတျမိ အောငျ လုပျနသေေးတယျ..။ နှုတျခမျးကို စုပျပေးရာက အသာ လညျတိုငျကွော့ကွော့လေးကို မထိတထိ ဖှဖှလေး နမျးပေးတယျ..။ ဒီမိနျးမ တဈခြီ ပွီး သှားခဲ့ပွီ ဖွဈတာကွောငျ့ လြှော့ကသြှားတဲ့ ကာမစိတျကို ပွနျပွီး အားကောငျး ထနျပွငျးလာအောငျ ဆှပေးမွှငျ့ ပေးတာပါ..။ သူမနှာထနျ ရမကျပွငျးလာမှ တကျခတြာ သူမအဖို့ရော ကနြေျာ့အတှကျပါ ပိုကောငျးမယျ.. မဟုတျလား..။ ဒျေါထား ထားစိုး ဟာ နှာကွီးလှနျးတဲ့ မိနျးမပဲ…။ သိပျကွာကွာ မဆှပေးရပါဘူး..။ လူးလှနျ့ကော့တကျလာပွီး နှာပွနျတငျးလာပါတယျ..။
ဟငျ့ဟငျ့…နမေိုးရာ…မငျးကတော့ တကယျပဲ အနှိုးဆှ ကောငျးတဲ့ ကောငျလေးပဲ.. ထားစိတျတှေ ပွနျထလာပွီ..၊ လုပျခံခငျြပွီ ကှာ….ခတြော့…နျော.. သူမပါးစပျက ထုတျဖျောပွောလာပါတယျ..။ ဒီစကားသံမြိုးကွားခငျြနတေဲ့ ကနြျော….အပွတျ ခိုကျသှားတာ ပေါ့..။ ကနြေျာ့ လီးကွိးကို ကွိုကျရဲ့လား…. အငျး..အငျး…ကွိုကတျယျ..၊ ကွိုကျလို့ လုပျခိုငျးတာပေါ့…. မမ ကို ကောငျးကောငျး လိုးပေးမယျ..နျော.. အငျး…… ဒီလိုအမေးအဖွေ လုပျတာက ဒျေါထားထားစိုးကို ပိုစိတျကွှလာအောငျ ဖနျလိုကျတာ..။ မေးရငျး ပွောရငျးက သူမရဲ့ ပေါငျတနျကွီးနှဈခြောငျးကို ဆှဲယူကိုငျမွှောကျပွီး ကားနိုငျသမြှ ကားအောငျ တှနျးထုတျလိုကျတယျ..။ ဒီအခါမှာ သူမရဲ့ စောကျပတျအကှဲကွောငျးက ဟကျတကျကှဲပွီး စောကျခေါငျးဝဟာလညျး အပွူးသား ပျေါလာပါတယျ..။
ကနြျောက ကိုယျလိုးရတော့မယျ့ စောကျပတျကွီးကို သသေခြောခြာ တဈခကျြကုနျးကွညျ့ပွီး လီးကို စောကျပတျပျေါ အလြားလိုကျ အသာလေး ကပျတငျပေးထားတယျ..။ ဒျေါထားထားစိုးက ပကျလကျအိပျနရောကနေ အသာလေး ခေါငျးလေးထောငျပွီး သူ့အဖုတျ ပျေါ လီးခြောငျးတကေ့ပျထားတာကို ကွညျ့တယျ..။ အမလေးကှာ…မငျးဟာကွီးကတော့ကှာ…တကယျ့ဟာကွီးပဲ.၊ နညျးတာကွီး မဟုတျဘူး..၊ မာတောငျနတောပဲ ..သှငျးတော့လကှော…. ခပြါတော့.. ထားမနနေိုငျတော့ဘူး… လီးကိုကွညျ့ပွီး ရမကျပွငျးပွငျးနဲ့ ပွောတယျ..။ ကနြျောက လီးကို ညာဖကျလကျနဲ့ကိုငျပွီး ဒျေါထားထားစိုးရဲ့ စောကျပတျကို ပိုပွဲသှားအောငျ ဘယျလကျနဲ့ဆှဲဖွဲလိုကျ တယျ..။ ပွီးတော့ ငေါကျတောကျကွီးပျေါလာတဲ့ စောကျစကေို့ လီးထိပျနဲ့ တကေ့ပျပှတျပေးလိုကျတယျ..။ စောကျစဟေ့ာ ထိပှတျမိ တော့ စဈခနဲစဈခနဲ ကို ဖွဈသှားတယျ..။ အိုး….အို…မောငျကလညျးကှယျ…ဘယျလိုမြားလုပျနတောလဲ….လို့ ထားမနနေိုငျတော့ဘူး ကှယျ..၊ စောကျပတျထဲက သိပျကိုယားနပွေီ… လိုးပါတော့ကှာ.. မောငျ့လီးကွီးနဲ့ ထားကို လိုးပါတော့.. သှငျလေ…. တဈခကျြတညျး အဆုံးဝငျအောငျ သှငျးခရြမလား.. အငျး အငျး…. မမ ခံနိုငျပါတယျ..နျော… ၇တယျ..သှငျးမှာသာ သှငျးစမျးပါ…၊ ဒီမှာ ယားလို့ သလေိမျ့မယျ…လိုးမှာလိုးတာမဟုတျဘူး.. ဒျေါထားထားစိုးဟာ ဖငျကွီးကို ကော့ပငျ့ပေးထားတယျ..။ သူ့ဖငျအကော့ မှာ ကနြျောကလညျး ခါးအား ပေါငျအားတှေ အပွငျ ကိုယျလုံးဖိအားပါ ဖွညျ့ထညျ့ပွီး ခပျကွမျးကွမျးပဲ လီးကို ထိုးဆောငျ့သှငျးခြ လိုကျပါတယျ…။ ဒီလိုသှငျးတာ…ကွမျးတော့ကွမျးတယျ ပွောရမယျ..။ ဒါပမေယျ့ အဝငျအရမျးထိတာကွောငျ့ အသှငျးခံရတဲ့ မိနျးမ ဟာ နာပမေယျ့ အရမျးကို စှဲမကျသှားတတျကွတာ ကိုယျတှပေဲ့..၊ အခုလညျး ဒျေါထားထားစိုး ဒီလိုဖွဈရအောငျ တမငျကို လုပျလိုကျ တာ..။
ဘှတျ.ဘု ဘု ဘှတျ.ဗဈြ….. သူ့စောကျခေါငျးထဲမှာ စောကျရညျတှေ ပွညျ့လြှံနပွေီး..၊ အဖုတျကို ကကြနြန ဆှဲဖွဲပွီးမှ အားပွငျးပွငျး ဖိထိုးသှငျးခလြိုကျတာမို့ လီးက တရှိနျထိုး ဝငျသှားတယျ.. ။ ဝငျတာမှ အဆုံးထိပဲ… စောကျပတျထဲ လီးဝငျသှားတဲ့ အသံကလညျး တျောတျောကယျြတယျ..။ အား အာ….အ…နာတယျ…ကြှတျကြှတျ… အရမျးကွီးပဲ…… နာလိုကျတာကှာ….ဟငျ့ ဟငျ့….. ဒျေါထား ထားစိုး မကျြနှာလေးရှုံ့မဲ့သှားပွီး ကနြေျာ့ရငျဘတျကိုလညျး လကျဝါးနှဈဖကျနဲ့ ဆီးပွီးတှနျးရှာတယျ…။ တျောတျောကို နာသှားပုံပါ ပဲ…။ ပါးစပျက သာသှငျးပါ သှငျးပါပွောနပွေီး တကယျထိုးသှငျးတော့ ဒီလောကျအျောရလား… မမရ… ကနြျောက သူ့နို့ကွီး တဈဖကျကို လှမျးကိုငျဆှဲလိုကျရငျး ပွောတယျ..။ အလုပျခံခငျြနတောကိုး…. သှငျးခိုငျးရတာပေါ့..၊ ဟငျ့..မောငျ့လီးက အရမျးကွီး တဲ့.ဟာ..၊ ဒါကွီးကို တအားဆောငျ့ခလြိုကျမှတော့ နာတာပေါ့…၊ နာရငျ အျောမှာပဲ…
ဒျေါထားထားစိုးက နှုတျခမျးလေး မစူတစူနဲ့ ပွောတယျ..။ အပြိုပေါကျမလေး အမူအရာမြိုးမို့ ကနြေျာ့ရငျထဲ ကလြိကလြိဖွဈပွီး သူ့ ပါးတဈဖကျကို လှမျးလိမျဆှဲလိုကျမိတယျ..။ နာတယျဆို လီးပွနျထုတျလိုကျမယျ..လေ…. အံမယျ..တျောစမျးပါ…သှငျးပွီးမှတော့ ထုတျမနပေါနဲ့တော့…. ဒါဆို…ဘာလုပျပေးရ မှာလဲ…. ဆောငျ့ပေးပေါ့…လို့…တကယျပဲ…. ကနြျောလညျး သူ့စောကျပတျထဲ အကွပျအသိပျတိုးဝငျနတေဲ့ လီးခြောငျးကွီးကို ခပျ ဖွညျးဖွညျး ပွနျဆှဲထုတျတယျ..။ တဈဝကျသာသာလောကျ ထတျုပွီးတော့ ခပျ ဖွညျးဖွညျးပဲ ထိုးသှငျးပွနျထုတျနဲ့ ညှောငျ့ပေး တယျ..။ ခပျဖွညျးဖွညျး လိုးနပေမေယျ့ စောကျပတျထဲ လီးဝငျထှကျနတေဲ့ အသံလေး တှကေတော့ တဖုတျဖုတျ တဖတျဖတျ မွညျ နတေယျ..။ ဒျေါထားထားစိုးဟာလညျး မကျြတောငျတှေ မှေးစငျးကပြွီး တဟငျးဟငျး ဖွဈနတေယျ..။
ဘယျလိုလဲ…ဒီလိုညှောငျ့ပေးတာ ခံလို့ ကောငျးရဲ့လား… ကောငျးတော့ ကောငျးတယျ… ဒါပမေယျ့ သိပျအားမရဘူး…. ဒါဆို ဆော ငျ့လိုးပေးမယျ လေ…. ဒီလိုမြိုး ပကျလကျ ပေါငျထောငျအနအေထားနဲ့ တအားဆောငျ့ရငျတော့ ထားခံနိုငျမယျ မထငျဘူး မောငျရဲ့..၊ ဟို….ထား တစောငျးကှေးပေးမယျလေ… နောကျကခပြေါ့…. မမကွိုကျသလို လိုးပေးရမယျ့လူပါ… ကဲ.. ကှေးပေးလေ..၊ လီးကို တော့ အဖုတျထဲ ထိုးကပျပေးထားမယျ… စောကျပတျထဲ လီးတပျရကျနဲ့ နရောပွောငျးတတျတယျ မဟုတျလား…. လုပျကွညျ့မယျ လေ….ကြှတျထှကျသှားလညျး ပွနျထညျ့ပေါ့လို့…. ပကျလကျပေါငျထောငျလိုးနရောကနေ တစောငျးကှေးအနအေထား ပွောငျးရ တာ သိပျတော့ မခကျလှပါဘူး..။ ဆှဲထောငျထားတဲ့ ခွထေောကျနှဈခြောငျးက ညာဖကျခွထေောကျကို အသာတိမျးယူပွီး ကိုယျ ဘယျဖကျကှေးခြ ခါးအသာလိမျလိုကျ ဘယျဘကျစောငျးလိုကျပွီး ခပျကှေးကှေးလေးဖွဈအောငျးပွုပွငျလိုကျရုံပါပဲ…။ လီးနဲ့စောကျ ပတျ တပျရကျသားက ကြှတျထှကျမသှားအောငျ နှဈယောကျ အပေးအယူမြှမြှ လှုပျရှားဖို့ပဲ လိုပါတယျ..။
ဒီလို အလှုပျအရှားမှာ လီးကစောကျပတျထဲ ထထိမိမိ ပှတျကပျနတောရယျ ၊ လီးကြှတျမသှားရအောငျ သတိထားနရေယျကလညျး စိတျလှုပျရှားစရာ ဖီလငျတဈမြိုးပေါ့..။ နှဈယောကျသား အလိုကျသငျ့ လှုပျရှားလိုကျကာ ဒျေါထားထားစိုး တဈယောကျ ဘယျဘကျ စောငျးရကျ ခပျကှေးကှေးလေးနဲ့ ကနြျော သူ့နောကျက ဘေးစောငျးကပျအိပျရကျ အနအေထားကို ပွောငျးရှသှေ့ားပါတယျ..။ လီးက လညျး အဖုတျက ကြှတျမထှကျဘူး..။ တပျရကျတနျးလနျးပဲ..။ ကနြျောက ဒျေါထားထားစိုးရဲ့ ကားအိနတေဲ့ ဖငျဆုံကွီးအပျေါ ညာ ပေါငျခှခြိတျပွီး နောကျကနေ ခပျပွငျးပွငျးလိုးဆောငျ့ပေးတယျ..။ တစောငျးကှေးလိုးကွတဲ့အခါမှာ အထိရောကျဆုံးနညျးဖွဈတဲ့ အောကျပငျ့ဆောငျ့နညျးနဲ့ လီးကို ကျောကျောထိုးပငျ့တငျပွီးဆောငျ့လိုးပေးလိုကျတာပါ…။ စောကျပတျဟာ ပေါငျနှဈလုံးကွားညှပျနေ တာမို့ အဝငျအထှကျ ပိုစီးစီးပိုငျပိုငျရှိတယျ..။ တဗဈြဗဈြ တဘုဘု အသံလေးတှတေော့ ဆကျတိုကျမွညျနတေယျ..။
အခုလို တစောငျးကှေးထားပွီး ခတြာ စောစောက ပကျလကျလိုးပေးတာနဲ့ ဘယျလိုထူးခွားလဲ… ပိုခံလို့ကောငျးလား…မမ… အောကျပငျ့ဆောငျ့ခကျြတှေ ခပျပွငျးပွငျး ဆောငျ့လိုပေးရငျး ကနြျောက မေးလိုကျတယျ..။ ဟငျ့ဟငျ့…အခုလို ကှေးပွီးနောကျက ခှ လိုးတာ ထားရဲ့စောကျပတျအတှငျးသားတှနေဲ့ လီးခြောငျးကွီး ပိုပွီးထိမိ ပှတျတိုကျမိတော့ စီးစီပိုငျပိုငျနဲ့ အရသာတဈမြိုးရှိတယျ..၊ ဒါ ပမေယျ့ ဟို…..လီးကအဆုံးဝငျအောငျ ဆောငျ့လို့မရတော့ တဈမြိုးကွီး ပဲကှာ…. ပကျလကျလှနျပွီး ပေါငျထောငျခမြှ လီးက စောကျ ပတျထဲ အဆုံးဝငျမှာပေါ့…အခုလို နောကျက ကှေးခရြငျ လီးအဆုံးဝငျအောငျ ဆောငျ့ပေးဖို့ခကျတယျ …မမရဲ့… ဟုတျပါတယျ…ဒါ ပမေယျ့ ပကျလကျပေါငျထောငျပွီး အရမျးဆောငျ့လိုးရငျ ကွာရှညျ ဘယျခံနိုငျမှာလဲ..၊ သားအိမျကို စိုကျစိုကျထိသှားတဲ့ဟာ… မောငျ ကော နောကျကနေ ကပျလိုးရတာ အားရရဲ့လား… ကနြျောက ရပါတယျ…မမရယျ… ၊ မမ ဖီလငျကောငျးကောငျးရဖို့ အဓိကပါ..၊ သားအိမျ ကို လီးမစိုကျမိပဲ အဆုံးဝငျအောငျ အပီးဆောငျ့နိုငျတဲ့ ပုံစံရှိတယျ..၊ အဒီပုံစံနဲ့ ခံကွညျ့ပါလား… အငျး…စမျးကွညျ့တာ ပေါ့…အခုလေးငါး ဆယျခကျြလောကျ ခပျပွငျးပွငျး ခပျကွမျးကွမျးဆောငျ့လိုးပေးအုနျးကှာ… ကနြျောက သူမခါးကို တငျးတငျးဆှဲ ပွီး လီးကို တအားကော့ပငျ့ ဆောငျ့သှငျးပေးလိုကျတယျ..။
ဘှတျ…ဘု…အား ဟငျ့….ခါးကိုမဆှဲနဲ့ကှာ…နို့ကို ကိုငျညှဈပွီး ဆောငျ့ပါလား…. ဒါကွောငျ့ ကနြျောလညျး ခါးကို မဆှဲတော့ပဲ နောကျ ကနေ နို့ကွီးနှဈလုံးကို ခပျတငျးတငျး စုံကိုငျ ဆှဲညှဈပေးပွီး ကော့ကော့ ဆောငျ့ပေးလိုကျတာ ဒျေါထားထားစိုး ဖငျလုံးကွိးတှေ တ တုနျတုနျ လှုပျခါနတောပဲ..။ ဆယျခကျြလောကျ အားပွငျးပွငျး ခပျကွမျးကွမျး ဆောငျ့ပေးလိုကျပွီး လီးကို အရငျးထိ ထိုးကပျဖိစိမျ ပေးထားလိုကျတယျ…။ မမ…လိုးနညျးပုံစံ ပွောငျးရအောငျ… ပွောငျးလေ…ဘယျလိုမြိုးလဲ…. ညာပေါငျကွီးကို ထောငျလိုကျ…၊ ဘယျပေါငျကို တော့ ခပျကှေးကှေးလေး မှရေ့ာပျေါမှာ ခထြား..၊ ကိုယျကို မစောငျးတစောငျးလုပျ…ဟုတျပွီ….. သူမကို အနအေထားပွောငျးပေးဖို့ ပွောဆိုသငျပွရငျး ကနြျောလညျး သူမနောကျကြောမှာ ကပျပွီး တစောငျးအိပျနရောက အသာထထိုငျ လိုကျတယျ..။ အလိုကျသငျ့ ထောငျပေးလာတဲ့ သူမ ညာဖကျပေါငျကွီးကို ပှပေို့ကျထိနျးထားပွီး ကနြေျာ့ညာဖကျပုခုံးပျေါ ဆနျ့လကျြ တငျပွီး သူမရဲ့ စောကျပတျထဲ ဖိကပျထိုးစိုကျထားတဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့ လီးခြောငျးကွီး ပွုတျမထှကျသှားရအောငျ ထိနျးတဲ့သဘောနဲ့ ဖငျ ကွီးကို ကွှနိုငျသမြှ ကွှတငျပေးထားတယျ…။
ကနြျောက အလိုကျသငျ့ သူမပေါငျကွားထဲ တိုးဝငျပွီး ဘယျဖကျခွထေောကျကို မှရေ့ာပျေါကှေးတငျထားတဲ့ သူမဘယျဖကျပေါငျ အပျေါ ခှဲခြိတျလိုကျတယျ..။ တဈဖကျပှငျ့ ဘယျတစောငျးလိုးနညျး မှနျသှားပါပွီ..။ ထောငျထားတဲ့ ညာဖကျပေါငျတနျကွီးကို အပီ ကိုငျထိနျးပွီး ခပျသှကျသှကျ ခပျကွမျးကွမျး လိုးဆောငျ့ပေးလိုကျတယျ..။ ဆောငျ့နရေငျးက သူမညာဖကျ ဖငျသားခွမျးကွီးကိုလညျး ကိုငျညှဈလိုကျ ၊ ပှတျပေးလိုကျ တဈခါတဈခါ ခပျဆတျဆတျ ရိုကျပေးလိုကျ လုပျပေးတယျ..။ ခါးက မလိမျ့တလိမျ စောကျ ပတျထဲကို ဘေးစောငျးမကတြကြ လမျးကွောငျးကနေ လီးကို ဆောငျ့ထိုးလိုးပေးတာမို့ လီးဟာ သားအိမျကို မထိခိုကျတော့ပဲ သားအိမျဘေးနားက ကပျပွီး အတှငျးဘကျကို နကျနကျရှိုငျးရှိုငျး တိုးဝငျနတေယျ…။ ဆောငျ့လိုးနတေဲ့ ကနြေျာ့အနနေဲ့ ဒျေါထားထား စိုးရဲ့ ပေါငျကွီးနဲ့ တငျပါးဆုံကွီးကို အနအေထားမှနျနအေောငျတော့ စနဈတကြ ကိုငျးထိနျး မပေးထားရတာပေါ့…။
ဒီလိုကိုငျထိနျးပေးမထားရငျ အနအေထားလှဲပွီး လီးက သားအိမျကို ခြျောထိုးမိ ထောကျမိသှားနိုငျတယျ..။ အလိုးခံနတေဲ့ ဒျေါထား ထားစိုး နာနာကငျြကငျြ ဖွဈသှားနိုငျတယျ..။ ဒါကွောငျ့ သတိထားပွီး သသေခြောခြာ ဆှဲထိနျးရငျး ဆောငျ့လိုးရတာ..။ လီးကို စောကျပတျထဲအဆုံးဝငျအောငျ အားပွငျးပွငျးနဲ့ ဆောငျ့လိုးရတာကွောငျ့ ကနြေျာ့အဖို့ သိပျကို အကွိုကျတှနေ့ရေပါတယျ..။ ဘယျ့နှယျလဲ…ဒီလိုပုံစံနဲ့လိုးတာ လီးအဆုံးဝငျပမေယျ့ သားအိမျကို မထိဘူးမို့လား..၊ ခံရတာ ကောငျးလား…. အငျ့..ဟငျ့ဟငျ့ ကောငျးပါတယျကှာ..၊ လီးကွီးက အဆုံးဝငျတာ အဖုတျအတှငျးဘကျထဲအထိ နငျ့နတောပဲ..၊ ဒါပမေယျ့ နို့ကွီးတှကေို လှမျးမဆှဲနိုငျ တော့ အဲဒီမှာ ဟာတာတာကွီးနဲ့ ၊ ထားက နို့ဆှဲပွီး ဆောငျ့လိုးတာကို သိပျကွိုကျတာ…
ဒါဆို…ကနြျော နို့လှမျးဆှဲကွညျ့မယျ..မမက ကိုယျကို ကော့ကွှပေး…ဟုတျလား…. ဒီလိုတဈဘကျပှငျ့လိုးနညျး ပုံစံနဲ့ လိုးရငျး..၊ ဖငျကွီးကိုပဲ အဓိကထားကိုငျပှတျ ဖဈြညှဈနိုငျ တာ…၊ နို့ကိုတော့ တဈခါမှ လှမျးဆှဲပွီး မလိုးဖူးသေးဘူး…။ ဒျေါထားထားစိုးက နို့ဆှဲပွီး ဆောငျ့လိုးတာမှ အားရတယျဆိုတော့ ကြ နျောလညျး စမျးကွညျ့ရတာပေါ့..။ ထောငျထားတဲ့ သူ့ညာဖကျပေါငျကို ညာလကျနဲ့ပဲ ကိုငျထိနျးပွီး ဘယျလကျကိုတော့ သူ့နို့ ကွီး တှဆေီ လှမျးလိုကျတယျ..။ ဒျေါထားထားစိုးကလညျး တတောငျဆဈနဲ့ အားပွုထောကျပွီး ရငျဘတျအလိုကျသငျ့ ကွှပေးတော့ နို့ ကွီးတဈလုံးကို လှမျးမီတယျ..။ ခပျတငျးတငျး ဆှဲညှဈပေးပွီး တအားကုနျ ဆောငျ့လိုးပဈလိုကျတယျ..။
ဘှပျ ဘှပျ ဗဈြ ဗဈြ…ဒုတျ……ဒုတျ.. ဆောငျ့ရတာ ပိုကောငျးလာသလိုပဲ..။ နို့ကွီးကို ဆှဲကိုငျညှဈထားရတာကလညျး စီးစီပိုငျပိုငျနဲ့..။ အဲ …ခါးက မကုနျးတကုနျးမို့ နောကျကြောတော့ အတျောညောငျးတယျ..။ ဒျေါထားထားစိုးမှာတော့ နို့အပီဆှဲပွီး ဆောငျ့လိုးတာခံရ လို့ အရမျးကို သဘောကဇြိမျတှနေ့တော အသိသာကွီးပါပဲ…။ အငျ့ဟငျ့ဟငျ့….ကောငျးလိုကျတာကှာ..။ နို့ကို ဆှဲပွီး အပီးလိုးစမျး ပါ…အောငျမယျလေး လေး….. မမ…အခုလို လိုးတာ ကွိုကျပွီလား….. အငျး….အငျး လိုးစမျးပါ တအားဆောငျ့…. နို့ကိုလညျး တ အားဆှဲညှဈ…ဆောငျ့ ဆောငျ့… ဆောငျ့စမျးပါ….. အား…..ဆောငျ့ပါ…. ဆောငျ့ပါ….. တအားကွီး ဆောငျ့ပဈစမျးပါ….. မောငျ ရဲ့….အီး….. အိုး…….. ဟငျ့ဟငျ့……. ကနြျောလညျး နောကျကြောညောငျးလို့ ညောငျးမှနျး မသိတော့ပဲ ရှိသမြှ အားတှေ အကုနျထုတျ သုံးပွီး ဒရကွမျးကို လိုးပဈလိုကျမိတယျ…။ အခကျြတဈရာကြော စကျသနေတျပဈသလို ဆောငျ့လိုးပေးပွီးတဲ့အခါ ကနြေျာ့ သုတျ ရကေို ဆကျမထိနျးနိုငျတော့ဘူး…။ ပနျးထုတျခငျြလာပွီ…။ ဒျေါထားထားစိုးကွညျ့ရတာလညျး နောကျတဈခြီ ထပျပွီးတော့မယျ့ အနအေထားမို့ အားခဲပွီး ဆယျခကျြ အသားကုနျ ဆောငျ့ပေးလိုကျတယျ..။ ပွီးတော့ ဒျေါထားထားစိုးရဲ့ စောကျပတျကွီးထဲ ကနြေျာ့ လီးခြောငျးကွီးကို အဆုံးထိ ဖိကပျထိုးသှငျးပွီး ညာဖကျပေါငျတနျကွီးကို ခပျတငျးတငျး ဆှဲထားလိုကျတယျ..။ သူ့နို့ကွီးတဈလုံးကို လညျး အုပျကိုငျပွီး တအားဆှဲညှဈပေးထားလိုကျတယျ..။
အဖုတျထဲ ဖိကပျထိုးသှငျးထားတဲ့ လီးက ငေါ့ခနဲ ငေါ့ခနဲ လှုပျခါတယျ..။ ကနြေျာ့တဈကိုယျလုံး အကွောတှဆှေဲသလို တှနျ့ခနဲ တှနျ့ ခနဲ ဖွဈတယျ..။ အဲ….နောကျတော့ လီးတနျထိပျက သုတျရတှေေ ပနျးထှကျပွီး ဒျေါထားထားစိုးရဲ့ စောကျခေါငျးပေါကျထဲ ဝငျကုနျ တယျ..။ အဲဒီအခါမှာ ဒျေါထားထားစိုးဟာလညျး သိမျ့သိမျ့တုနျခါပွီး နောကျထပျတဈခြီ ပွီးသှားပွနျပါတယျ…။ အောငျမယျလေး လေး….ကောငျးလိုကျတာ…… မောငျရာ…သိပျကောငျးတာပဲ…..၊ ဟငျ့ဟငျ့…. မောငျ့လရတှေကေလဲ တကယျပဲ…မြားလိုကျတာ…. ထားတော့ မောငျ့ကို အပွတျစှဲသှားပွီ ကှာ…… ဒျေါထားထားစိုးက အံကွိတျသံလေးဖွငျ့ ပွောရငျး သူမ၏ နို့အုံတဈဖကျကို တအား ကိုငျညှဈထားတဲ့ ကနြျောရဲ့ ဘယျလကျကို ခပျတငျးတငျး ဆုပျကိုငျတယျ..။ သူ့စောကျပတျကလညျး တရှရှလှုပျရှားပွီး ကနြေျာ့လီးကို စဈခနဲ စဈခနဲနအေောငျကို စုပျယူနတော… သိပျခံလို့ကောငျးတယျဗြာ….။ လီးကို စောကျပတျထဲ အတျောကွာအောငျ ထိုးကပျ စိမျထားပွီး ဒျေါထားထားစိုးလညျး အသကျရှူမှနျသှားတဲ့ အခါကမြှ အသာပဲ ဆှဲထုတျလိုကျတယျ..။ လူခငျြးလညျး ခှာပွီး ခုတငျ စောငျးမှာ ထိုငျခလြိုကျတယျ..။
မငျးက မိနျးမတဈယောကျကို ဖီလငျတှေ အပွတျရအောငျ ၊ အရသာတှအေ့ောငျ လုပျပေးတဲ့နရောမှာ သိပျကို ကြှမျးကငျြတာပဲ နျော… ဒီလို လုပျနညျးကိုငျနညျးတှေ ကြှမျးနအေောငျ မငျးဘယျလိုမြား သငျထားတာလဲ…၊ မငျးကို သငျပေးတဲ့လူရှိလား…၊ ထားသိ ခငျြတယျ….. ပွောပွပါလား…ဟငျ…. ဒျေါထားထားစိုးက မေးလာတယျ..။ ဒီလို မေးလာတဲ့ အခါမှာ ကာမမှုတှအေကွောငျး လကျထပျသငျကွားပေးခဲ့တဲ့ လူတှေ အကွောငျး ကနြျော ပွနျအမှတျရလာတယျ…။ တကယျတော့ အဲဒီအကွောငျးတှေ သူမြားကို ကနြျော ပွောလပွေ့ောထ မရှိပါဘူး..။ ဒါပမေယျ့ ဒျေါထားထားစိုးကိုတော့ ဒီအကွောငျးတှေ ပွောပွခငျြတဲ့စိတျ ရှိနပေါတယျ..။ မမ….တကယျပဲ….ဒီအကွောငျးတှေ သိခငျြလို့လား…. အငျးပေါ့….သိခငျြတယျ….ပွောပွကှာ…… အဲဒီအကွောငျးတှေ ပွောရရငျ တော့ ဇာတျလမျးရှညျတယျ…. မမရဲ့…၊ မမက နားထောငျခငျြ သိခငျြတယျဆိုတော့ ကနြျောပွောပွရတော့မှာပေါ့လေ….. ဒီ…..လို….ပါ…..မမ…….ရယျ…..
အရာရှိမ ဒေါ်ထားထားစိုး နဲ့ နေမိုး
နေမိုးသည် အသက် ၂၅ နှစ်ခန့်ရှိပြီး ရုံးတစ်ရုံးတွင် စာရေးအဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသည် ။ သူ၏ အဓိက ဝင်ငွေလမ်းကတော့ ရာဂ ကြွယ် ရမက်ထန်ကာ လောကစည်းစိမ် ကောင်းကောင်း ခံစားပျော်ပါးလိုသော အမျိုးသမီးများကို အခကြေးငွေယူကာ လိုးပေးရ သော အငှါးလင် အလုပ်ဖြစ်သည်..။ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေမိုး အငှါးလင်အဖြစ် အလုပ်သွားလုပ်လေ့ရှိသည်..။
နေမိုး၏ အထက်အရာရှိ ဒေါ်ထားထားစိုးမှာ ရှမ်းတရုတ်မ တစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။ အသက်အရွယ်ကတော့ နေမိုးနှင့် မတိမ်းမယိမ်း ဖြစ်သည် ။ အသားဖြူကာ အရပ်မြင့်ပြီး ကယိုလုံးကိုယ်ပေါက် ဆူဖြိုးတောင့်တင်းသည် ။ ဒေါ်ထားထားစိုး၏ လင် တော်မောင်က အင်ဂျင်နီယာကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံခြားတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည် ။ ကလေးလည်း မမွေး ကြသေး ။ နေမိုးသည် သူ့အထက်အရာရှိမ ဒေါ်ထားထားစိုးကို ကြိတ်ပြီး သဘောကျနေသည် ။ သို့သော် နီးစပ်ရန် ဖန်ဖို့ အခွင့်အလမ်း မရသောကြောင့် ကြတိပြီးတော့သာ ပစ်မှားနေပြီး ၊ခိုးလို့သာ ငမ်းနေရသည် ။
တစ်ခုသော တနင်္လာနေ့တွင် နေမိုးသည် ရုံးတွင် အလုပ်များသွားကာ ရုံးဆင်းနောက်ကျသဖြင့် အငှားလင်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ရာ နေရာသို့ တစ်နာရီလောက် နောက်ကျမှ ရောက်သွားခဲ့ရာ ဒေါ်ထားထားစိုးကို အထူးအမှောင်ခန်းခေါ် အလင်းရောင် လုံးဝမရှိပဲ မှောင်ချထားသော အခန်းထဲတွင် ကာမစည်းစိမ်ခံစားပျော်ပါးရန် ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် အဝတ်လဲခန်း၌ အဝတ်အစားများ ချွတ် နေသည်ကို ချောင်းကြည့်ပေါက်မှ အသာချောင်းကြည့် တွေ့မြင်ခဲ့သည် ။
ဒေါ်ထားထားစိုးကို လိုးပေးရမည့် အငှါးလင်မှာ နေမိုး၏ သူငယ်ချင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် သန်းဝင်းဖြစ်သည် ။ သန်းဝင်းက မိမိမှာ ဧည့်သည် မိန်းကလေး ငယ်ငယ် တစ်ယောက်နှင့် အပြတ်လိုးထားရလို့ သည်မိန်းမကြီးကို တစ်ရှိုးစာ အပြည့် မချနိုင် ၊ တစ်ချီ လောက်သာ ဝင်ချပြီး မိမိနှင့် လာပြီး လူစားလဲရန်ပြောရာ နေမိုးက အကြိုက်တွေ့ပြီး သဘောတူလက်ခံလိုက်သည် ။ အမှောင်ခန်း ထဲတွင် နေမိုးနှင့် ဒေါ်ထားထားစိုး ကာမစပ်ယှက် ပျော်ပါးကြသည် ။ မှောင်နေသောကြောင့် မိမိနှင့် စပ်ယှက်နေသူမှာ မိမိ၏ လက်အောက်မှ စာရေးလေး နေမိုး ဖြစ်ကြောင်း အစပိုင်းတွင် ဒေါ်ထားထားစိုး မသိခဲ့ပေ ။ သို့သော် ဒေါ်ထားထားစိုး၏ ဖင်ကို နေမိုး က ပယ်ပယ်နယ်နယ်လိုးနေသည့် အချိန်တွင် ခုတင်ဘေးဘောင်တွင် တင်ထားသော ( မိမိကိုလိုးနေသည့် အငှါးလင်နှင့် လင်း လင်းချင်းချင်း ကြည့်မြင်လိုလျင် လျပ်စစ်မီးဖွင့်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားသည့် ) ခလုတ်လေး ရှိသည် ။
ဖင်လိုးခံရင်း ဖီလင်တွေ အရမ်းတက်နေသော ဒေါ်ထားထားစိုးက မတော်တဆ ထိကိုင်နှိပ်မိရာမှ မီးရောင်လင်းလာကာ ဖင်လိုးဖင်ခံ လုပ်နေကြသူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မြင်တွေ့သွားခဲ့ကြရသည်..။ နေမိုးက ကျကျနန ဖင်လိုး အဖုတ်ပွတ်ပေး ထားရာ ဒေါ်ထားထားစိုးမှာ ခံစားနေရသော ကာမစည်းစိမ်ချမ်းသာကို လက်လွှတ်မခံနိုင်ပဲ ၊ မိမိကို ဖင်လိုးနေသူမှာ မိမိ၏ လက်အောက်မှ စာရေးဖြစ်သူ နေမိုးမှန်း သိလျှက်နှင့် ဆက်ပြီး အလိုးခံလေတော့သည် ။ သည်လိုနှင့် ပြေလည်သွားကြကာ နေမိုး က ဒေါ်ထားထားစိုးကို ကာမအရသာ တနင့်တပိုး ခံစားရရှိစေရန် သူတတ်မြောက်ထားသော ကျွမ်းကျင်မှု နည်းလမ်းအားလုံးကို အိပ်သွန်ဖာမှောက် အကုန်အစင်ထုတ်သုံး လိုးပေးရာ လိုးသူနေမိုးရော အလိုးခံသူ ဒေါ်ထားထားစိုးပါ မကြုံဖူးသော ဖီလင်တွေ ခံစားရလျှက် အရသာကောင်းကောင်းတွေ့သွားခဲ့ရလေသည်……..။
တစ်ရှိုးစာ လိုးပွဲအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အချိန် ၃ နာရီ စေ့သွားသည့် အတွက် အလိုးရပ် ၊ စပ်ယှက်မှုများ တစ်စခန်း သတ် သောအခါ နေမိုးနှင့် ဒေါ်ထားထားစိုးတို့သည် အထူးအမှောင်ခန်းထဲတွင် ထုံးစံအတိုင်း မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝင်ပေါက် အသီးသီးမှ လမ်းခွဲထွက်လာခဲ့ကြသည် ။ နေမိုးအနေဖြင့် သူကြိတက်ာ သဘောကျနေခဲ့သော သူ့ အထက်အရာရှိ ဒေါ်ထားထားစိုး ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးခဲ့ရသည့်အတွက် အထူးပင်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိသလို ၊ ဒေါ်ထားထားစိုးမှာလည်း သူမကြုံဖူးသမျှသော ပျော်ပါးစပ်ယှက်မှုများတွင် အထူးကဲဆုံးသော ကာမအရသာနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ခံစားခဲ့ရသည့် နေမိုးနှင့်လိုးခဲ့ရသော ယခုလိုးပွဲ ကို စွဲစွဲမက်မက် ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်..။
လိုးရသည်ကို ပင် အားမရနိုင်ခဲ့သေး..။ ထို့ကြောင့် အငှါးလင်းများနှင့် ဆုံတွေ့ ပျော်ပါးစပ်ယှက်မှု အ၀၀ကို တာဝန်ယူစီမံ ဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးသူ မာမီအေး အားသွားရောက်တွေ့ဆုံကာ အမှောင်ခန်းထဲတွင် သူမနှင့် ပျော်ပါးခဲ့သူ နေမိုးကို မနက်ဖြန်တွင် အထူးအော်ဒါယူကာ တစ်ရှိုးစာ ထပ်မံပျော်ပါးလိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့လေသည်..။ မနက်ဖြန် နေမိုးအလုပ်ဆင်းတဲ့နေ့ မဟုတ်ဘူး ၊ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ လာပျော်ချင်ရင်တော့ ရနိုင်လိမ့်မယ်… ကျမက နေမိုးဆိုတဲ့လူနဲ့ပဲ ပျော်ချင်တာ .. သူအလုပ်ဆင်းတဲ့နေ့ မဟုတ်ပေမဲ့ စပါယ်ရှယ်… အော်ဒါလုပ်ပြီး ချိန်းလိုက်လို့ မရဘူးလား..၊ မနက်ဖြန် မရရင်တောင် သန်ဘက်ခါ ပေါ့…. ဟာ..အဲဒါလဲ မရနိုင်ဘူးလေ..၊ မာမီတို့ဆီမှာက ကောင်လေးတွေကို တစ်ပတ်တစ်ခါပဲ အလုပ်လုပ်ရပြီးတော့ ၊ အလှည့်ကျ နားနေနိုင်အောင် စီစဉ် ထားတာ..ညီမရဲ့..၊ ဒီအလုပ်က အားပြည့်လန်းဆန်းနေဖို့ လိုတယ်မဟုတ်လား..၊ ခြောက်ရက်နားထားပြီး အားအပြတ် ပြန်ပြည့်နေမှ ဧည့်သည်မိန်းမတွေ အရသာကောင်းကောင်း ခံစားရအောင် အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့..ညီမကြီးရယ်..၊ နေမိုးနဲ့ ရှင်တကယ်ပျော် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နောက်အပတ် တနင်္လာနေ့အထိ စောင့်ရလိမ့်မယ်…
ဒေါ်ထားထားစိုး အနည်းငယ်တွေပြီး စဉ်းစားနေသည် ။ တစ်ပတ်ကြီးများတော့ သူမအနေနှင့် မစောင့်လို ။ မိမိနှင့် တစ်ရုံးတည်း အတူတူ အလုပ်လုပ်နေသည်မို့ နေမိုးကို မိမိဖာသာ အချိန်းအချက်လုပ်ကာ ပျော်ပါးလို့ ရနိုင်ကြောင်း စဉ်းစားမိသည် ။ ကောင်းပါ ပြီ… ဒါဆိုလဲ ကျမစောင့်လိုက်မယ် .. နောက်လာမဲ့ တနင်္လာနေ့မှာ သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်.. ဒါဆိုရင် စရံတော့ ပေးသွားရလိမ့်မယ်… ဒေါ်ထားထားစိုး မာမီအေးတောင်းသော စရံငွေကို ပေးချေပြီးနောက် အငှါးလင်များနဲ့ ပျော်ပါးရာမှ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည် ။အိမ်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ နေမိုးနှင့် လိုးခဲ့ဆော်ခဲ့ပုံများကို ပြန်သတိရနေသည် ..။ ထိုနေ့ညက ဒေါ်ထားထားစိုးသည် မမက်စဖူး ကာမ စပ်ယှက်ခံရသည့် အိပ်မက်ကို မက်သည်.။ အိပ်မက်ထဲတွင် သူမနှင့် ကာမစပ်ယှက်ခဲ့သူကလည်း နေမိုးပင် ဖြစ်နေပါသည်..။
နောက်တစ်နေ့နံနက် ရုံးသို့ ရောက်သောအခါ ဒေါ်ထားထားစိုးမှာ နေမိုးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာ မျက်နှာပူသလိုလို ၊ ရှက်ရွံ့သလိုလို ဖြစ်နေသည် ။ နေမိုးမှာလည်း အတော်ပင် နေရခက်နေသည်..။ နှစ်ယောက်စလုံးပင် အရင်နေ့ ညနေပိုင်းက ရက်ရက်ရောရော ကာမစပ်ယှက်ခဲ့ကြပုံများကို ပြန်လည်မြင်ယောင်ကာ နေကြသည်..။ နေမိုးအနေဖြင့် ဒေါ်ထားထားစိုးကို ကြည့်မိတိုင်း မိမိမြင်ခဲ့ တွေ့ခဲ့ အားရပါးရ ကိုင်တွယ်ခဲ့လေသော ရင်သားတင်သား ပေါင်လုံးပေါင်တန်များကို အထင်းသား အရှင်းသား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လာလျက် လီးမှာလည်း မတ်ခနဲ တန်းခနဲ တောင်ကာနေရသည် ..။ဒေါ်ထားထားစိုးအဖို့လည်း နေမိုးကို ကြည့်မိလေတိုင်း မိမိကို တက်ခွလိုးခဲ့ပုံများ နှင့် နေမိုး၏ ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသော လီးချောင်းကြီးကို မြင်ယောင်ကာ အဖုတ်ထဲမှာ စိုစိစိ ၊ ဖင်ပေါက်က ယားသလိုနှင့် အရမ်းကို နေရခက်နေသည် ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောရမည် ကိုပင် ရွံ့တွန့်တွန့် ဖြစ်ကာနေကြသည်..။ လူချင်းမတွေ့ဖူးပဲ မိဘဆွေမျိုးများ စေ့စပ်ပေးမှုကြောင့် ညားခဲ့ရသော ဇနီးမောင်နှံတွေလို မင်္ဂလာဦးညလွန်မြောက်ကာ နောက်တစ်နေ့ တွင်ခံစားရသော ခံစားမှုမျိုး နှင့် အတော်ပင် ယင်းထ နေကြသည်..။
နေမိုးတို့လို အငှါးလင်များတွင် မိမိတို့ စပ်ယှက်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ဖူးသည့် ဧည့်သည်အမျိုးသမီးများနှင့် မတော်တဆ အပြင်ဘက်တွင် တွေ့ဆုံမိလျင် မသလိုက် မသိဖာသာ နေပေးရသော စည်းကမ်းရှိသည်..။ ဧည့်သည် အမျိုးသမီးများကလည်း မိမိတို့နှင့် လိုးဖူး သော အငှါးလင် တစ်ယောက်ယောက်ကို အလုပ်နေရာ မဟုတ်သော အခြားတစ်နေရာတွင် တွေ့ဆုံမိပါက မသိသလို ခပ်တည် တည် နေကြတာများသည်..။ပြောရလျင် အငှါးလင်များနှင့် ပျော်ပါးကြသူ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်နေရာတွင်သာ။ တွေ့ဆုံ ပျော်ပါးကြသည်မှလွဲပြီး အပြင်အပတွင် အသိအကျွမ်းဖြစ်သွားကြမှု ရှားပါးသည်..။ ယခု ဒေါ်ထားထားစိုးကတော့ နေမိုး၏ အထက်အရာရှိ ဖြစ်နေလေရာ နေမိုးမှာ ခါတိုင်းလို ဆက်ဆံ ပြောဆိုရကောင်းနိုး ၊ မသိသလိုပဲ ခပ်တည်တည် နေရကောင်းနိုးနှင့် အခက်တွေ့နေရလေသည်..။ ဒေါ်ထားထားစိုးသည် နေမိုးနှင့် သီးသန့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် ချိန်းဆိုဖို့ စိတ်ကူးရှိသော်လည်း ဘယ်က ဘယ်လို စတင်ကာ အချိန်းအချက် လုပ်ရမည်ကိုတော့ စဉ်းစားမရ ဖြစ်နေသည်..။
သူမသည် ရာဂရမက် ထန်ပြင်းပြီး လိုအင်ကြီးမားသော မိန်းမ တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဆိတ်ကွယ်ရာ လူသူကင်းဝေးရာတွင် သာ အရှက်အကြောက်မရှိ ကာမအရသာကို အပီအပြင် ခံစားမည် ၊ လူရှေ့သူရှေ့တွင်တော့ ပိပိပြားပြား ၊ အရှက်အကြောက် ကြီးသော ဂုဏသ်ရေရှိ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်အနေဖြင့်သာ နေထိုင်သွားလာသည်။ အခု သူမ၏ တန်ဖိုးထားရသော ရာထူး ဂုဏ်သိမ် အမှတ်အသားဖြစ်သော ရုံးနေရာတွင် မိမိ၏ လက်အောက်မှ စာရေးလေးကို အငှါးလင် အဖြစ် သဘောထားကာ အချိတ်အဆက်ပြုလုပ် ပြောဆိုဖို့ရာမှာ အတော်ဝန်လေး ခက်ခဲရသည်..။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် ကုန်ဆုံးသွားသည်..။ နောက်တစ်နေ့တွင် တော့ ဒေါ်ထားထားစိုးမှာ ရုံးအလုပ်ဖြင့် အပြင်သို့ သွားနေရပြီး ရုံးသို့ ညနေ ရုံးဆင်းကာနီးလောက်မှ ပြန်ရောက်ရာ သူမနှင့် နေမိုး တွေ့ရုံမြင်ရုံမျှလောက်သာ ရှိခဲ့သည်…။ နောက်တစ်ရက်မှာလည်း ရုံးအလုပ်များ ပုံကျကာ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ရပြီး နေမိုးနှင့် တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် ပင် မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပေ..။ ဒေါ်ထားထားစိုး၏ ကာမရမက်စိတ်များမှာ ရက်ကြာလာသည့်အခါ လျှော့ကျ ခြင်း မရှိပဲ ထန်ပြင်းမြဲ ထန်ပြင်းနေသည်..။
ဒီလိုနဲ့ သောကြာနေ့တွင်တော့ နေမိုးကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ချိန်းဆိုကာ ညနေပိုင်းတွင် အတူတူ တစ်နေရာရာ သွားပျော်ပါးရန် ဒေါ် ထားထားစိုး ကြံစီစိတ်ကူးမိတော့သည်..။ ပါးစပ်နှင့် ပြောဆိုဖို့ ဝန်လေးသောကြောင့် စာတစ်စောင် ကြိုတင်ရေးထားသည်..။ နေမိုး ကို အမှတ်မထင် အသာ စာပေးပြီး အချိန်းအချက် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်..။ အကြံကကောင်းသော်လည်း ထိုနေ့တွင် နေမိုးတစ် ယောက် ရုံးမတက်ပဲ ခွင့်ယူသောကြောင့် ဘယ်လိုမှ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ရပေ..။ သည်ကောင်လေး ဘာလို့များ ခွင့်ယူတာ ပါလိမ့်..၊ အငှါးလင်အဖြစ် နေ့ဘက် အလုပ်များ သွားလုပ်နေရောလားဟုပင် ဒေါ်ထားထားစိုး တွေးမိလေသည်..။ သို့သော် နေမိုး အလုပ်ရှင် မာမီအေးက ( ယောက်ျားထိန်းဟု ခေါ်ရမည်လား မသိ ) နေမိုးသည် တနင်္လာနေ့ တစ်ရက်သာ အလုပ်လုပ်သည်ဟု ပြောထားသည့်တိုင် ၊ ဒေါ်ထားထားစိုးမှာ သို့လောသို့လော အတွေးများဖြင့် စိတ်မောနေရတော့သည်..။ နောက်နေ့များမှာတော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ကျသဖြင့် သူမ မချင့်မရဲ ဖြစ်ကာ စိတ်လျှော့လိုက်ပြီး တနင်္လာနေ့ကျမှသာ ဒီငနဲ လိုးတာ အပီခံပစ်လိုက်တော့မည် ဟု စိတ်ထဲ တေးမှတ်ထားလိုက်သည်..။ နောက်ဆုံးတော့ ဒေါ်ထားထားစို အားခဲ မောင်းတင်ကာ စောင့်ဆိုင်းနေသော တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်း သို့ရောက်လာလေတော့သည်..။
တနင်္လာနေ့ညနေ ရုံးဆင်းတာနဲ့ ကျမလည်း အိမ်ကို အမြန်ပြန်ပြီး ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားတွေ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပြီး နေမိုးနဲ့ ပျော်ပါး ဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်.။ နေမိုးအလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာကို ၅ နာရီခွဲတိတိမှာ ကျမရောက်တယ်.။ တစ်ရှိုးစာအတွက် ကျန်ငွေကို ချေပြီး တာနဲ့ ပျော်ပါးမယ့်အခန်းထဲကို တစ်ခါတည်း တန်းသွားလိုက်တယ်..။ အစတုန်းက လင်းလင်းချင်းချင်း ရှိမဲ့ အခန်းတစ်ခန်းကို ယူ မယ်လို့ပဲ စိတ်ကူးမိပါသေးတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကျမ ဒီမှာလာပြီး အရသာခံတိုင်း အထူးအမှောင်ခန်းကိုပဲ ရွေးချယ် အသုံးပြုခဲ့တာမို့ ၊ အခြားအလင်းရောင်ရှိမယ့် အခန်းတစ်ခုခု ယူလျင် ဖီလင်လာသင့်သလောက် မလာမှာကို စိုးလို့ပါ..။ ခါတိုင်း ပျော်ပါးနေကျ အ မှောင်ခန်းကိုပဲ ယူလိုက်တယ်..။ နေမိုးတို့ရဲ့ အလုပ်ရှင် မာမီအေးကလည်း ကျမအတွက် အထူးအမှောင်ခန်းကိုပဲ ကြိုတင်ဖယ်ထား စီစဉ်ပေးထားတာဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ ..။ အမှောင်ခန်းဆိုပေမယ့် လိုအပ်ရင် မီးဖွင့်လို့ရတာပဲ..။ အထဲရောက်တဲ့ အခါ ကြိုက်တဲ့အချိန် မီးဖွင့်နိုင်တယ်..။ မှောင်ထဲမှာ ပျော်ချင်ရင်လဲ ရတယ်..။ ကဲ…. ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ..။
ကျမဟာ ဒီအထူးအမှောင်ခန်းထဲမှာ လာပြီး စပ်ယှက်ပျော်ပါးခဲ့တာဟာ အခု ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်တော့ပါဘူး.။ ခြောက်ခါ လောက်ကို ရောက်ဖူးပြီးပါပြီ ။ အထာကျနေပြီလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် အခုတစ်ခေါက်လောက် တစ်ခါမှ စိတ် လှုပ်ရှား ရင်ဖိုတာမျိုး အရင်က မကြုံခဲ့ရဘူး ။ အိုလေ….ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က အမှတ်မထင် နေမိုးလိုးတာခံခဲ့ရ ၊ နေမိုးဟာ အငှါး လင်တစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေမှန်း သိခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကစပြီး တစ်ပတ်လုံးလုံးကို ကျမစိတ်တွေ အနည်းနည်းအဖုံဖုံ လှုပ်ရှား နိုးကြွနေခဲ့တာပါ ။ နေမိုးနဲ့ လိုရမှာကို အရမ်းတမ်းတ လိုလားနေခဲ့တာပါ ။ ဒီနေ့တော့ အဲဒီတမ်းတစိတ်တွေဟာ အပြင်းထန် အနိုးကြွဆုံးပေါ့ …..။
အမှောင်ခန်းထဲကို မဝင်ခင် အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ရတဲ့အခန်းငယ်လေးထဲရောက်သွားတာနဲ့ကျမဟာ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားလာ ပါပြီ ။ ကျမအဖို့ ကိုယ်သိကျွမ်းနေတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ လိုးရမှာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲ..။ အရင်က ဒီမှာလာပြီး အငှါးလင် တွေနဲ့ ပျော်ပါး စပ်ယှက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် သူတို့ကို ကျမ လုံးလုံးမသိခဲ့သလို ၊ သူတို့ကလဲ ကျမကို မသိခဲ့ပါဘူး..။ ဒီနေ့လိုးကြမယ့် နေမိုး ကတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကောင်းကောင်းသိနေကြတယ်လေ..။ စိတ်လှုပ်ရှားရမက်ထန်တဲ့အခါ ဝြဖစ်လေ့ရှိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ ၊ ကျမပေါင်ကြားက စောက်ပတ်ကြီး မို့ဖောင်း အရည်စို ရွှမ်းအိနေသလို နို့အုံကြီးတွေ တင်းမာပြီး နို့သီးတွေ စူတက် ကော့ထောင်လို့ နေကြပါပြီ..။
ကျမဟာ ခပ်မြန်မြန်ပဲ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ခွာချပစ်လိုက်ပါတယ်..။ ကျမနို့ကြီးတွေဟာ အရမ်းတင်းမာနေတာ ကြောင့် ရင်ဘတ်တောင် ကျိန်းတိန်းတိန်း အေးတေးတေး ဖြစ်နေပါတယ်..။ နို့သီခေါင်းဟာလည်း တင်းမာပြီး ကော့ချွန်ထောင် တက်နေတာ အောင့်သလိုလိုတောင် ရှိနေလေရဲ့ ။ ဟော….အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်မယ်လုပ်တော့ ဘောင်းဘီခွကြား အသား နေရာဟာ ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲက ယိုစိမ့်ထွက်တဲ့ စောက်ရည်ကြည်တွေနဲ့ အပြတ်ကို စိုရွှဲနေပါရောလား..။ ရေဆွတ်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ..။ ကျမဟာ ရှမ်းတရုတ်ကပြားမမို့ စောက်ရည်အထွက်များပါတယ်..။ ကာမစိတ်ထန်ပြင်းတဲ့အခါတွေမှာ စောက်ရည် အတော်ကို ထွက်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် အခုလို အတွင်းခံဘောင်းဘီ ခွကြားနေရာတစ်ခုလုံး ( အရည်ညှစ်ယူရင်တောင် ရနိုင် လောက်အောင်) ရွှဲရွှဲစိုသွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး..။
အင်း …နေမိုးကတော့ ကျမကို တကယ် နှာထန်ရမက်ကြွအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ယောက်ျားပါပဲ ။ သူလိုးတာတောင် မခံရသေးဘူး..။ ကျမ အရည်တွေ အရမ်းကိုထွက်ပြီး ကာမဆိပ်လည်း အပြတ်ကို တက်နေပါပြီ..။ သူနဲ့လိုးကြရရင်တော့ ဘယ်လိုများနေမယ်ဆို တာ စဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့ ကြက်သီးများတောင် ထမိပါရဲ့..။ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ခွာပြီးတာနဲ့ ကျမဟာ အလိုးခံရမယ့် အမှောင်ခန်း ထဲကို အသာပဲ လျှောက်လှမ်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်..။ ဒီအခန်းထဲမှာ မကြာခင် ကြုံတွေ့ခံစားရတော့မယ့် ကာမအရသာကို တွေးကြည့် ရင်း ဒူးတောင် မခိုင်ချင်သလို ဖြစ်လာရတယ်..။ အခန်းထဲမှာတော့ ဘာမီးမှ မထွန်းထားတာကြောင့် ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်လို့နေပါ တယ်..။ ဒီအခန်းအထာကို အကျွမ်းဝင်ပြီးသားမို့ ခုတင်ရှိရာကို အလွတ်ပဲ လျှောက်လှမ်း အရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ ခုတင် စောင်းမှာ အသာထိုင်ရင်း ၊ အခန်းထဲကို လျှောက်လှမ်းဝင်လာမယ့် နေမိုးရဲ့ ခြေသံကို နားစွင့်နေလိုက်တယ်..။ ကျမရဲ့ ဘယ်ဖက် လက်ကို ခုတင်ဘောင်မှာရှိတဲ့ မီးခလုတ်ပေါ် အသင့်တင်ထားလိုက်တယ်..။ အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ ခြေသံကိုကြားရတာနဲ့ ခလတ်ုကို နှိပ်ပြီး မီးဖွင့်လိုက်မယ်..။ ပြီးတော့ မီးရောင်အောက်မှာ နေမိုးနဲ့ ကျမ အပီပြင်ကို ဖိုက်ပစ်လိုက်မယ်..။
ဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာတော့ ကျနော်အလုပ်နေရာကို ခပ်စောစောပဲ အရောက်သွားခဲ့တယ်..။ ရောက်တာနဲ့ မာမီအေးက ကျနော့် အတွက် အထူးအမှောင်ခန်းထဲမှာ လိုးပေးရမယ့် အလုပ်ရှိတယ်..။ တစ်ရှိုးစာအော်ဒါလို့ ပြောတာကြောင့် ကျနော်လည်း အမှောင် ခန်းထဲကို အဝင် ဧည့်သည်အမျိုးသမီးတွေ အဝတ်အစား ချွတ်ထားခဲ့ရတဲ့ အခန်းလေးထဲကို ချောင်းကြည့်နိုင်တဲ့ ချောင်းကြည့် ပေါက်နားမှာ အသင့်သွားစောင့်နေတယ်..။ ဧည့်သည်မိန်းမ အဝတ်ချွတ်ပြီး အမှောင်ခန်းထဲ ရောက်သွားမှ ကျနော်က ဝင်ရမှာကိုး..။ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ လူမတွေ့ရဘူး..။ ဧည့်သည်မိန်းမ မရောက်သေးဘူး.လေ…။ ဒါကြောင့် ကျ နော် အသာပဲ ထိုင်စောင့်နေတယ်..။ ထိုင်မိလိုကတ်ယ်ဆိုရင်ပဲ သန်းဝင်း ရောက်လာတယ်..။
ဘယ်လိုလဲ..မင်းအမှောင်ခန်းထဲမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရှိတယဆို.. သန်းဝင်းကမေးလို့ ကျနော် ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်..။ ငါတော့ ဒီနေ့ အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးကွ..၊ မင်းကတော့ အခုရောက် အခုအလုပ်ဖြစ်နဲ့ တယ်ဟုတ်ပါလား..၊ မင်းဖိုက်ပေးရမဲ့ ဆော်ကော ရောက်ပြီလား.. စောစောကကြည့်တုန်းကတော့ မရောက်သေးဘူးကွ… မရောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ မင်းကထိုင်နေရလားကွာ..၊ အသာ စောင့်ကြည့်နေပေါ့..၊ ဒါမှ သူရောက်ကိုယ်ရောက် အထဲကို ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဝင်နိုင်မှာလေ..မှန်း ငါကြည့်ပေးမယ်.. သန်းဝင်းက ချောင်းကြည့်ပေါက်ကနေ အသာကြည့်တယ်..။ ကျနော်ကတော့ အသာပဲ ဆက်ထိုင်နေတယ်..။ အရင်ပတ်တုန်းက ဒေါ်ထား ထားစိုးနဲ့ အပီဖိုက်ခဲ့ကြရပုံတွေ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်..။ ဒီအပတ်လည်း ဒေါ်ထားထားစိုးနဲ့ ပြန်ဆုံ၇ရင်ကောင်းမှာ ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပြန် ဆုံဖို့ဆိုတာကလည်း သိပ်ကိုခက်ပါတယ်လေ…။
ဟော…လာပီဟေ့….ဟာ…အရင်ပတ်က မင်းနဲ့ငါ တစ်လှည့်စီ ချပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆော်ကြီးပါလားကွ… တောက်မိုက်တယ်ကာ… အယ် နေတာပဲ…ဟီး…. ခဏကြာတော့ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ သန်းဝင်းရဲ့ အံတကြိတ်ကြတိနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားသံကို ကြားရတယ်..။ ကျနော့်ရင်ထဲ အတော်ကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားတယ်..။ ဒါဟာ တကယ်ပဲလား..။ အခု ကျနော် အထူးအမှောင်ခန်းထဲမှာ လိုးပေးရမယ့် ဧည့်သည်အမျိုးသမီးက ဒေါ်ထားထားစိုးပဲလား..။ သန်းဝင်းဆိုတဲ့ကောင်က လူနောက်..။ သူပြောတာ အတည်ယူလို့ ရတာမဟုတ်ဘူး..။ ဒါကြောင့်သူ့ကို အသာတွန်းဖယ်ပြီး ချောင်းကြည့်ပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်လိုက် တဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်ထားထားစိုးဟာ အဝတ်အစားတွေ အကုန်လုံး ချွတ်ပစ်လို့ ဗလာကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေပါပြီ…။ မို့ထွားတဲ့ ရင်သား ဆိုင်ကြီးတွေ ၊ ကားအိတဲ့ တင်သားကြိးတွေ..၊ တုတ်ဖြိုးတဲ့ ပေါင်တန်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေ ၊ အိုး…မြင်ရတဲ့ ကိုယလ်ုံးကိုယ်ပေါက် အချိုးအဆက်တွေကတော့ အားပါးပါးလို့ ပြောရအောင်ကို စိုပြေထွားကြိုင်းလှပါတယ်..။ ဟော….ဒေါ်ထားထားစိုး ကိုယ်လုံးတီး ကြီးနဲ့ အထူးအမှောင် ခန်းထဲကို လှမ်းဝင်သွားပြီး ကျနော်ဝင်လိုက်သွားဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်..။ အထဲရောက်ရင် …၊ ဟား… တွေး လိုက်တာနဲ့တောင် ဖီလင်တွေ အရမ်းရလာပြီ..။
ဟိုဆော်ကြီးပဲကွ…ဒါကြီး ဖြူဖြူတောင့်တောင့်၊ နှာကလည်း ထန်ထန်နဲ့ လိုးရတာ ဂွတ်ရှယ်ပဲကွ.. ကိုင်းဟေ့..ဒီတစ်ပတ်လည်း ဟို အရင်ပတ်တုန်းကလို မင်းတစ်လှည့် ငါတစ်လှည့် ဖိုက်ကြရအောင်ကွာ.. မင်းအခု အရင်သွားဆော်နှင့်.. ငါမာမီအေးကို သွားပြောပြီး တစ်လှည့်ဝင်ချမယ် ဟုတ်လား.. ကျနော် ချောင်းကြည့်ပေါက်ကနေ မျက်လုံးခွာလိုက်တော့ သန်းဝင်းက ပြောတယ်.။ ကွိုင်ပဲ ဗျာ..။ ကျနော် ဒေါ်ထားထားစိုးကို တစ်ရှိုးစာ ( ၃ နာရီ ) အချိန် အကုန်လုံးကို အပြတ် လိုးပစ်ချင်တာ..။ အခု သန်းဝင်းက တစ်လှည့် ဝင်ဖိုက်မယ် ဆိုတော့ အခက်ပဲ..။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သန်းဝင်းကို တစ်လှည့်ပေးလိုစိတ် မရှိဘူး..။ ဒါပေမယ့် အပြတ် ငြင်းပစ်လိုက် ဖို့ကလဲ မသင့်ဘူးလေ..။ အရင်အပတ်တုန်းက သူ့အတွက် လိုးရမယ့်အလုပ်မှာ ကျနော့်ကို အစားဝင်ပေးဖို့ ခေါ်ခဲ့တာကြောင့် ဒေါ် ထားထားစိုးကို လိုးခဲ့ရတာ မဟုတ်လား..။ သူ့ကျေဇူးရှိတယ်လေ. ။ ကျနော့်အလှည့်ကျတော့ ကပ်လို့ မဖြစ်ဘူး…။ ဒါကြောင့် မငြိမ့် ချင်ငြိမ့်ချင်နဲ့ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ရတယ် ..။ သန်းဝင်းလည်း ခပ်မြူးမြူးပဲ လျှောက်လှမ်းထွက်သွားတယ်..။ သူ့ကြည့်ရတာ ဒေါ်ထား ထားစိုးကို လိုးရတာ သိပ်သဘောကျနေပုံပဲ ..။ ဟုတ်မှာပါပဲလေ…။ ဒေါ်ထားထားစိုးလို ရုပ်ကလဲ ချော ၊ ငယ်ကလည်း ငယ်.. လုံးကြီးပေါက်လှ ဖြူဖြူတောင့်တောင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို လိုးရတာ ဘယ်ယောက်ျား မကြိုက်ပဲ နေမှာလဲ..။ ကျနော့်ကိုပဲ ကြည့်လေ…. ဒီမိန်းမကို မြင်ရကတည်းကကို လိုးချင်နေခဲ့တာ ။
သန်းဝင်းထွက်သွားတော့ ကျနော်လည်း အဝတ်အစားတွေ အမြန်ဆုံးချွတ်ပြီး အထူးအမှောင်ခန်းထဲကို ချက်ချင်းပဲ လှမ်းဝင်လိုက်ပါ တော့တယ်..။ အခန်းထဲမှာ မှောင်မဲနေတာဆိုတော့ ဘာမှ မမြင်ရပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အခန်းထဲက ခုတင်ပေါ်မှာ ဒေါ်ထားထားစိုး ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ရှိနေမယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ကျနော် သိနေတယ်လေ ။ ဝတလ်စ်စလစ် ကိုယ်လုံးကြီး မကြာခင် ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ရောက်တော့မှာ မဟုတ်လား ။ နို့ကြီးတွေကို အပီကို ဆွဲပစ်လိုက်မယ် ။ စောက်ပတ်ကြီးကိုရော ၊ ဖင်ပေါက်ကိုပါ အပြတ်ကို လိုး ပစ်လိုက်မယ်..။ ကျနော်ဟာ ခုတင်ရှိရာကို ခြေလှမ်း ကြဲကြဲနဲ့ အမြန်ဆုံးရောက်အောင် လျှောက်လှမ်း ချည်းကပ်သွားပါတယ်..။ ခြေသုံးလှမ်းပြည့်အောင်တောင် မလှမ်းရသေးဘူး ။ ချောက် ခနဲ ခပ်တိုးတိုးအသံကလေးနဲ့ အတူ အခန်းထဲမှာ မီးထိန်ထိန်လင်းလို့ သွားပါတယ်..။
ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ပဲ မီးရောင် လင်းထိန်လာတာကြောင့် ကျနော် ခြေလှမ်းတုံ့ ရပ်သွားတယ်..။ မှောင်မဲနေတဲ့ နေရာမှာ မီး ရောင်လင်းထိန်လာတာမို့ ကျနော့် မျက်လုံးတွေလည်း ပြာဝြေပီး ချက်ချင်း ဘာကိုမှ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်နိုင်သေးဘူး..။ မျက်တောင် ကို လေးငါးချက်လောက် ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် လုပ်လိုက်တော့မှ အလင်းရောင်မှာ အသားကျပြီး မြင်နိုင်တွေ့နိုင်လာပါတော့တယ်…။
ကျမဟာ မျက်စေ့တွေကို စုံမှိတ်ပြီး ရမက်ထန် စိတ်လှုပ်ရှားစွာပဲ အမှောင်ခန်းထဲက ခုတင်စောင်းမှာ အသာထိုင်ရင်း အထဲကို ဝင် လာမည့် နေမိုးရဲ့ ခြေသံကို စောင့်လင့်နေတယ်..။ မှောင်နေရာက ရုတ်တရက်ကြီး မီးလင်းထိန်သွားရင် မျက်စေ့တွေ ပြာဝြေပီး မသဲ မကွဲဖြစ်သွားမှာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထားတာ ။ နေမိုးဟာ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး လီးချောင်းကြီး အတောင်သားနဲ့ ဒီအခန်းထဲ ဝင်လာမှာကို ကျမသိတယ်လေ..။ မီးဖွင့်လိုက်လို့ အလင်းရောင် လင်းထိန်လာတာနဲ့ သူ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကျကျနန ပီပီပြင်ပြင် မြင်ချင်ကြည့်ချင်လို့ ခုလိုလုပ်ထားတာ..။ အရင်အပတ်တုန်းက သူနဲ့ ဝက်ဝက်ကွဲအောင် လိုး ခဲ့ရပြီးပြီဖြစ်ပေမဲ့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို ကျမ သေသေချာချာ မကြည့်ရသေးဘူး..။ ဒီနေ့တော့ အားရအောင် ကြည့်မယ် ။ စိတ်ကြိုက် လည်း အီစိမ့်နေအောင် အလိုးခံမယ်..။
ဟော….။ အထဲကို ဝင်လာတဲ့ ခြေသံကြားရပါပြီ ။ ခြေသံကြားရတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျမလည်း အသင့်လက်တင်ထားတဲ့ မီးခလုတ်ကို ဆတ်ခနဲ ဖိပြီး ဖွင့်လိုက်တယ်….။ ချောက်.. မီးခလုတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အသံပေါ်လာတာနဲ့ ကျမလည်း မှေးမှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတွေ ကို အသာပဲ ဖွင့်လိုက်တယ်..။ ဟော…. နေမိုးတစ်ယောက် ခုတင်နဲ့ ခြေလှမ်း သုံးလေးလှမ်းလောက်အကွာမှာ ကယိုလုံးတီးနဲ့ မတ်တတ်ရပ်လျက်ကြီး ရှိနေတာ ကောင်းကောင်းကြီး မြင်ရပါပြီ ။ ကျမ မျက်လုံးတွေဟာလည်း ချက်ချင်းပဲ သူ့ပေါင်ကြားက လီးချောင်းကြီးဆီကို ရောက်သွားတယ် ။ အင်း….သူ့တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကျမကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးက အဲဒီ လီးကြီးပဲ မဟုတ်လား..။ အမယ်လေး…လေး….၊ တကယ့်ကို ကြီးတဲ့ လီးကြီးပါပဲ..ရှင်…၊ အားလည်း အားရစရာကြီး…။
ကျမ စိတ်အထင်တော့ လီးချောင်းကြီးရဲ့ အရှည်က ရှစ်လက်မ ကျော်ကျော်လောက်ကို ရှည်မလားပဲ…။ လုံးပတ်ကတော့ ကျပ်လုံး ထက်တောင် ပိုတုတ်သေးတယ်…။ အသည်းယားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ လီးထိပ်ဘက်ပိုင်းက ဒစ်ပြဲကြီးပါပဲ…။ အရေပြား လှီးဖြတ်ထားတာကြောင့် ဒစ်ကြီးဟာ အော်လန်ကြီးလို ပြဲအာလန်နေတယ်…။ လီးဒစ်ရဲ့ အရှည်ကလည်း သုံးလက်မနည်းပါး ရှိတာ ကလား..။ နီရဲ ပြဲအာလန်နေတဲ့ ဒစ်ကြီးဟာ မီးရောင်အောက်မှာ လက်လက်တောက်ပြောင်လို့ …။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုအကြောင်း ကြောင့်မှန်းတော့ မသိပါဘူး..၊ သူ့ ငပဲကြီးက ငေါ့ခနဲ ငေါ့ခနဲ လှုပ်ခါနေသေးတယ်..။ ကျမကို လီးတော့ပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောနေတဲ့ အသွင်မျိုး…။ အင်း…သူ့လီးချောင်းကြီးဟာ ကျမရဲ့ အသွေးအသားတွေနဲ့ ထိတွေ့ရင်းနှီးပြီးသားမို့ အခုလည်း ထပ်ပြီး စားချင်လို့ ငေါ့ ငေါ့ပြနေတာ ထင်ပါရဲ့..။ သူကတော့ ကျမကို ချက်ချင်း မြင်ပုံမရဘူး..။ ရုတ်တရက် လင်းထိန်လာတဲ့ မီးရောင်မှာ မျက်စေ့ ကျင့်သားမရပဲ ပြာဝေနေပုံပါပဲ..။ ဒါကြောင့် ကျမက ထိုင်နေရာက ထပြီး သူ့ကို လက်တွဲခေါ်လိုက်ရတယ်..။
လာ….ဒီမှာ… လက်တစ်ဘက်နဲ့ သူ့ ကိုဆွဲခေါ်လာရင်း ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့ပေါင်ခွကြားက မတ်တောင်နေတဲ့ လီးချောင်း တုတ်တုတ်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ဆွဲကလိမိတယ်…။ လီးကြီးက ရှည်ရုံ ကြီးရုံတင်မဟုတ်ဘူး..။ မာတာလည်း အပြတ်ကို မာနေတာပဲ..။ ဒါကြောင့်လည်း အရင်အပတ်တုန်းက သူလိုးတာခံရင်း ကျမ ကာမအရသာတွေ ကောင်းကောင်းခံစားခဲ့ရတာပေါ့….။ အခုလည်း အဲဒီ ဖီလင်မျိုး ခံရအုန်းတော့မယ်…။ ကျမလေ အရမ်းကို နှာထန်နေပါပြီ…ရှင်…။ ဒါကြောင့် ခုတင်နားရောက်တာနဲ့ သူ့ကို ချက်ချင်းပဲ ခုတင်ပေါ် တွန်းလှဲချလိုက်တယ်..။ သူ ခုတင်ပေါ် ပကလ်က်လန်ကျသွားတာနဲ့ ကျမလည်း ချက်ချင်းပဲ သူ့ ဘေးမှာ ဒူး တုတ်ချပြီး လီးချောင်းကြီးကို ကုန်းစုပ်လိုက်တော့တာပါပဲ…။ ကျမဟာ အငှါးလင်တွေနဲ့ ကာမစပ်ယှက် အပျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လီးတွေကိုတော့ စုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး..။ နေမိုးရဲ့ လီးကိုပဲ စုတ်ခဲ့တာ..။ ပြီးတော့ အဲဒီလို စုပ်ခဲ့ရတာကိုလည်း အရမ်းကို ဖီလင်ရ နေတာ…။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ သူ့အနေနဲ့ အထွေအထူး ပြောဆိုဆွဲဆောင်နေစရာကို မလိုတော့ပဲ လီးကို မြင်ရတာနဲ့ ကုန်းစုပ်ပေးလိုက်မိ တာပါပဲ….။ ဘယ်လောက်များ အာသာငမ်းငမ်းနဲ့ အစုပ်ကြမ်းသလဲ ဆိုရင် သူ့လီးကြီး တစ်ချောင်းလုံး ကျမပါးစပ်ထဲ တစ်ခါတည်း အကုန်လုံးဝင်အောင်ကို သွင်းယူစုပ်ပစ်လိုက်တာ..။ ကျမရဲ့ လင်တော်မောင် မနှစ်က သင်ပေးထားလို့ ကျမ လီးကောင်းကောင်း စုပ် တတ်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့ရဲ့ လီးတန်ရှည်ရှည်ကြီးတစ်ချောင်းလုံး ပါးစပ်ထဲ အကုန်ဝင်အောင် စုပ်ပေးတတ်တာပေါ့..။ လီးမစုပ်တတ်တဲ့ မိန်းမဆိုရင် ဘယ်ဒီလို လီးအကုန်ဝင်အောင် စုပ်နိုင်ပါ့မလဲ …ရှင်…။ သူ့လီးဒစ်ပြဲကြီးဆိုတာ ကျမရဲ့ အာခေါင်ကို ကျော်ပြီး လည်ချောင်းထဲအထိ တနင့်တပိုးကို ရောက်နေတာ…။
အားပါးပါး…ဟုတ်ပြီ စုပ်စမ်းပါ..၊ ကျနော့်လီးကို ကောင်းကောင်းစုပ်ပေးပါ…၊ မမ စောက်ပတ်ကိုလည်း ကျနော် အပီ ရက်ပေး မယ်….. အား….ရှီး…. ဟုတ်ပြီ…အဲဒီလို လျှာလေးနဲ့လည်း ကလိပေးတာ သိပ်မိုက်တာပဲဗျာ…၊ ..မမက လီးစုပ် အရမ်းကျွမ်းတာ ပဲ..ကိုး…. ကျမ အားရပါးရ စုပ်ပေးတာကြောင့် နေမိုးဟာ အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့ လူးလွန့်နေပါတယ်..။ လီးကို စုပ်ရင်း ဒစ်တစ်ဝိုက်ဆို ရင် နေမျိုးဟာ တွန့်ခနဲ တွန့်ခနဲကို ဖြစ်သွားတာပဲ..။ ဂွေးဥကို လည်း ကိုင်ဆော့ပေးပါအုန်း မမရယ်..၊ လီးစုပ်ပေးရင်း ဂွေးဥကို ကိုင် ပွတ်ပေးတာ သိပ်ခံလို့ ကောင်းလွန်းလို့ပါ.. နေမိုးက တောင်းဆိုလာတယ်..။ သူ့ ကို ကျမက ပိုက်ဆံပေးခေါ်ထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် လိုးကြတဲ့အခါမှာ ယောက်ျားစေစားတာကို မိန်းမက လိုက်လုပ်ပေးရတာက သဘာဝပဲ မဟုတ်လား..။ ဒါကြောင့် သူခိုင်းသလို ကျမ လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ကို ဖီလင်တက် စိတ်ထ်ကြွအောင် လုပ်ပေးနေနိုင်တာကိုး…။ လီးကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေးရင်း သူ့ဂွေးဥတွေကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးတယ်..။ အသာပင့်မြှောက်ပေးလိုက်သေးတယ်..။ သူ့ဂွေးဥ တွေက တွဲလည်း မတွဲဘူး ၊ အပေါ်တက်ပြီးတော့လည်း ကပ်မနေဘူး..။ မတွဲပဲ လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးနဲ့ ပွတ်လို့ကိုင်လို့ အဆင်ပြေရုံ ပဲ..။ ကျမက လီးစုပ် ၊ ဂွေးဥကိုင် လုပ်ပေးနေတုန်း သူက ကျမ ပေါင်ကြားကို လက်လှမ်းပြီး စောက်ပတ်ကို ကိုင်ပွတ်တယ်..။
အို….စောက်ပတ်တင် မဟုတ်ပါဘူး..။ စအိုပေါက်ကိုလည်း မထိတထိ လှမ်းကလိနေသေးတယ်..။ ဒီလို အကလိခံရတော့ ကျမ စောက်ပတ်ထဲက ယားလာတယ်..။ ဖင်ထဲကလဲ ယားလာတယ်..။ ကျမဟာ စိတ်ထထနဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ သူ့လီးချောင်းကြီးကို မဲပြီး အပီအပြင်ကို စုပ်ပစ်လိုက်မိတယ်..။သူက စောက်ပတ်ကို ပွတ်နေရာကနေ လက်နဲ့ညှပ်ပြီး ညှစ်ဆွဲလိုက်သေးတယ်..။ ကျမ အဖုတ်ဟာ စိတ်ထနေချိန်ဆိုတော့ လေထိုးထားသလိုကို ဖူးရွ ဖောင်းကြွတက်နေတာကလား..ရှင်..။ ညပ်ပြီး ညှစ်ဆွဲလိုက်တဲ့ သူ့ လက်ချောင်းတွေအကြားမှာ ကျမစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား တစ်ဖက်ဟာ တစ်တစ်ပြီး ညှပ်ပါသွားတာ ဘယ်လိုခံလို့ကောင်းမှန်း မ သိပါဘူး…။ ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေးနေလို့ မတ်တောင် မာကြောနေတဲ့ လီးချောင်းကြီးနဲ့ လိုးတာကို ခံချင်လာပါပြီ…။ လီးစုပ်လို့ ကောင်းလှ ပေမယ့် ဒီလီးနဲ့ လိုးတာ ခံရရင် ဒီထက်ပိုကောင်းမှာကို နားလည်တာကြောင့် လီးအပီအပြင် ဆက်ပြီးစုပ်ပေးချင်သေးတဲ့ အာသာ တွေကို ထိန်းချုပ်ပြီး လီးအစုပ်ရပ်လိုက်ပါတယ်..။ ကျမပါးစပ်ထဲက သူ့လီးချောင်းကြီးကိုလည်း မထုတ်ချင်ထတ်ုချင်နဲ့ ထုတ်ပေး လိုက်ရပါတယ်..။
လီးကို အစုပ်ကြမ်းလို့ သူ့စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သုတ်ရည်တွေ ထွက်ကုန်မှာကိုလည်း ကျမက မလိုလားဘူးလေ..။ သတ်ုထွက်သွား တယ်ဆိုရင် ဘာပြောပြော သူ့လီးကတော့ အခုလောက် ဘယ်မာတောင်နေတော့မှာလည်း..။ ကျမကိုလည်း ချက်ချင်း ဘယ်လိုးနိုင် မှာလည်း..။ အချိန်နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့ သူ့လီးကို အနားပေးရအုန်းမှာပေါ့..ရှင်..။ ဒါမျိုး မဖြစ်ချင်လို့ လီးအစုပ်ကို ရပ် လိုက်တာပါ..။ ဆက်တော့ စုပ်ချင်သေးတယ်..ရှင့်…။ လီးစုပ်လို့ ၀ သွားပြီလား….မမ ပါးစပ်ထဲက လီးကျွတ်သွားတဲ့အခါ သူက မေးတယ်..။ ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကိုလည်း လက်ချောင်းတစ်ချောင်း ဆတ်ခနဲ ထိုးထည့်လိုက်တာကြောင့် ကျမဖြင့် ရင်တောင် တုန်သွားရတယ်..။ အို ဟင့်……ဝတော့ ဘယ်ဝ အုန်းမလဲ..၊ စုပ်ရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ..၊ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ခနရပ်လိုက်အုန်း မယ်..၊ နောက်လုပ်စရာတွေ လုပ်ရအုန်းမယ် မဟုတ်လား… ကျမက သူ့ကို မျက်စလေးချီပြီး ပြောလိုက်တယ်..။ ဒီလို ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖြေဆလိုက်ရတာကလည်း အရသာတစ်မျိုးပါပဲ…။
ဒါဆို…ပက်လက်အိပ်လိုက်….. တက်ချတော့မလို့လား….ဟင်. မချသေးပါဘူး…. ကျမလည်း သူပြောသလို ပက်လကလ်ှန်ပြီး ချက်ချင်းအိပ်ပေးလိုက်တယ်..။ သူက တက်မချသေးဘူးဆိုတော့ ကျမအဖုတ်ကို ရပ်ပေးဖို့ ပက်လက် အိပ်ခိုင်းတာမှန်း နားလည်ပါ တယ်..။ ကျမကလည်း ဒီလို အဖုတ်ရက်ပေးတာကို သိပ်ကို ကြိုက်ပေါ့.ရှင်…။ ဒီလို အဖုတ်ရက်ခံရတဲ့ ဖီလင်ကို ကြိုက်လို့လည်း အငှါးလင်တွေနဲ့ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ကာမစပ်ယှက် ပျော်ပါးနေတာပေါ့…။ ဒါကြောင့် ပက်လက်လှန်ရုံတင် မဟုတ်ဘူး…၊ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုပါ ခပ်ကားကား အသင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ်..။ သူလည်း ကားသွားတဲ့ ကျမပေါင်ကြားကို မျက်နှာအပ်ချ လိုက်တယ်..။ သူ့ ပါးစပ်နဲ့ ကျမ စောက်ပတ် စပြီးထိမိတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျမတစ်ကိုယ်လုံး ပွက်ပွက်ဆူပြီး ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထ သွားစေလောက်တဲ့ အတွေ့ထူး အရသာကို စတင်ခံစားရတော့တာပါပဲ…။ ဒါကြောင့် သူ့ ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ လှမ်းအုပ်ကိုင်ပြီး အဖုတ်ပေါ် မျက်နှာ ပိုကပ်မိအောင် ဆွဲကပ်ပေးလိုက်တယ်..။ သကူ လျှာထုတ်ပြီး ၊ ကျမစောက်ပတ်ကို တပျပ်ပျပ်မြည်အောင် ကို မရွံမရှာ ရက်ပေးပါတော့တယ်..။ ကျမဆိုတာ ကော့ပျံလန်တက်သွားရတဲ့ အထိ ဖီလင်တွေ တက်လာရတော့တာပါပဲ…ရှင်…။
အားပါးပါး…ရှီး…ကောင်းလိုက်တာကွာ…ရက်ပေး..ရက်လေ..၊ ဟင့်ဟင့်..စောက်ခေါင်းထဲကို ဝင်အောင် ထိုးရက်ပေးစမ်းပါ…၊ အမ လေးလေး…အား အား..အီး..အားအား ရှီး..အား. ဒီတော့သူက အဖုတ်အကွဲကြောင်းကို အလျားလိုက် ရက်ပေးနေရာက လျှာကို ဆန့် ထုတ်ပြီး စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးထည့်တယ်..။ အပေါက်ရှာရ ခက်နေလို့လား ၊ ဒါမှမဟုတ် ကျမကို မရိုးမရွဖြစ်အောင် တမင်လုပ် ချင်လို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး..။ သူ့ လျှာက စောက်ခေါင်းထဲကို ကျကျနန မဝင်ဘူး..ရှင့်…။ လျှာဖျားလေးသာ ဝင်လိုက်ထွက် လိုက် တစ်ပြူတစ်ပြူ ဖြစ်နေတယ်…။ ဘယ်လောက် အနေရခက်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့..ရှင်..။ ကျမ ဘယ်နေနိုင် တော့ မှာလဲ…၊ စိုစိုစွတ်စွတ် လျှာဖျားလေးနဲ့ စောက်ခေါင်းထဲ မဝင့်တဝင် တစ်ပြူတစ်ပြူ ရက်ထိုး ကလိပေးတာ ခံနေရတဲ့ ဟာ ပဲ…။
ပြီးတော့ စောစောက သူ့လီးကြီးကို စုပ်ပေးခဲ့ရလို့ ရမက်ထန်ဖီလင်တက်နေတဲ့ အရှိန်နဲ့လည်း ပေါင်းပြီး ကျမဟာ ပြီး လုလု အနေအထားကိုတောင် ရောက်နေပြီ..။ အာသာရမက်တွေက သိပ်ကိုပြင်းထန်နေတာကြောင့် ကျမဟာ ကာမအရသာကလွဲလို့ အခြားဘာကိုမှ စိတ်ထဲ မထားနိုင်တော့ဘူး..။ ဒါကြောင့် သူရက်ပေးကလိပေးနေတဲ့ ကျမစောက်ပတ်ကို ကျမကိုယ်တိုင်ပဲ လက်နှစ် ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ကျကျနန ဆွဲဖြဲပေးလိုက်ပါတယ်…။ အဖုတ်ဖြဲပေးလိုက်လို့ ဟပြဲပြဲဖြစ်ပြီး ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းပေါက်ကလည်း အထင်းသားပေါ်သွားတာပေါ့…။ သူ့အဖို့ လွဲချော်နေစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး..။ လျှာထိုးထည့်စရာလည်း မခက်တော့ဘူး ပေါ့…။
ဟင့်ဟင့်….အခေါင်းထဲကို လျှာထိုးကလိရက်ပေးလေ..၊ လုပ်စမ်းပါ……. ယား….အရမ်းယားနေပြီ.. ထိုးစမ်းပါ..ရှင်ရယ်… ပါးစပ် ကလည်း အငမ်းမရ ပြောဆိုတောင်းခံမိတယ်.။ ဒီတော့မှ ကိုယ်တော်ချောက သူ့လျှာကို ကျမစောက်ခေါင်းထဲ လျောခနဲဆို ထိုး ထည့်လိုက်ပါတယ်..။ အောင်မလေးလေး…. ကောင်းချက်ကတော့ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ…။ ကျမရဲ့ ဖင်ကြီးဆိုတာ မွေ့ရာပေါ် ကနေ တစ်ထွာလောက် ကြွတက်သွားအောင်ကို ကော့တက်သွားတာ..။ သကူ ကျမရဲ့ ကားအိတင်းမောက်နေတဲ့ တင်သားခြမ်းကြီး နှစ်ခုကို သူ့လက်ဝါးကြီးတွေနဲ့ မိမိရရ ဆုပ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်ပြီး လျှာကို စောက်ခေါင်းထဲ ခပ်သွက်သွက် ခပ်မြန်မြန် ထိုးသွင်း လှုပ်ရှား ပေးတယ်..။ စောက်စေ့ကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ ညှပ်ပြီး စုပ်ပေးသေးတယ်..။ စောက်ခေါင်းထဲ လျှာကို ထိုးသွင်းပြန်ထုတ် လုပ်ရင်း စောက်စေ့ကိုပါ စုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့..ရှင်..။
သူမို့ လုပ်တတ်တယ်ရှင်..။ တကယ်ကို မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကာမအရသာတွေ့ပြီး ဖီလင်အပြတ်တက်အောင် ကျွမ်း ကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်တတ်တဲ့ လူပါပဲ..။ ဘယ်လိုကနေများ ဒီလောက် ပညာစုံအောင် တတ်နေတာပါလိမ့်…။ တစ်ချီချပြီး ခဏနား တုန်းကျမှ မေးကြည့်အုန်းမယ်…။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ သူကလိပေးနေတာတွေက ထိမိလွန်းတာမို့ ကျမဟာ ရင်ဖိုလှိုက် မော သွေးဆူရှိန်မြသော အရသာဖီလင်တွေ တနင့်တပိုးကြီး ခံစားရတာကြောင့် တစ်ကယိုလုံး တက်တက်တုန်ခါပြီး ကာမအရသာ အထွတ်အထိပ်ကို တက်လှမ်း ရောက်ရှိသွားပါတယ်…၊ တစ်ခါ ပြီးသွားခဲ့ရပါပြီ…ရှင်…။ အား..အား…ကောင်းလိုက်တာကွာ…မင်း အဖုတ်ရက်ပေးတာ… သိပ်ကိုမိုက်တာပဲ….. အမလေး.လေး.. မနေနိုင်တော့ဘူး… အား.. အရမ်းယားနေပြီ… အား အား… ထွက်ကုန် ပြီ… အမလေး.. လေး..စောက်ပတ်ထဲက အရည်တွေ ထွက်ကုန်ပြီ… အား အား အီး အိ..အီး…. ကောင်းလိုက်တာ….ကောင်း….လိုက်..အား.. အား…အား…
ပြီးသွားတာမှ တကယ့်ကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြီးသွားရတာ…၊ ကျမ စောက်ပတ်ထဲက ပြီးလို့ ထွက်ကျတဲ့ စောက်ရည်ကြည် တွေဆိုတာ များမှ များပဲ..။ တပွက်ပွက် ကို ထွက်ကျနေတာ..။ သူက အဲဒီ အရည်ကြည် ပျစ်ချွဲချွဲတွေကို ရှူးခနဲ ရှူးခနဲ စုပ်မျိုယူပြီး တဂွပ်ဂွပ် နေအောင် သောက်ချနေတယ်..။ ပြီးတော့ ကျမစောက်ပတ်ကို လျှာနဲ့ ပြောင်စင်သွားအောင် ဝေ့ဝိုက် လျက်ပေးသေး တယ်..။ ကျမဟာ ခြေပစ်လက်ပစ် လဲလျောင်းရင်း ဖီလင်ဆက်ယူနေမိတယ်..။ မမ..ပြီးသွားပြီ မဟုတလ်ား… အားရအောင် ရက် ပေးပြီးမှ ကျမပေါင်ကြားက ခေါင်းခွာပြီး မေးတယ်..။ အေးကွာ…မင်းက လိုးတောင် မလိုးရသေးဘူး…၊ စောက်ပတ်ရက်ပေးရုံနဲ့ ကို ပြီးသွားရတာ..၊ ကဲ မင်းလိုချင်တယ် ဆိုရင် လိုးလေ…ထားခံမယ်… တစ်ချီပြီးသွားတယ် ဆိုပေမယ့် သူ့လီးကြီးနဲ့ လိုးတာမခံရ သေးတဲ့ အတွက် ကျမ သိပ်အားမရနိုင်သေးပါဘူး..။ ဒါကြောင့် ပြောလိုက်တာ..။ သကူလည်းး သူပါပဲ..။ အထာပေါက်တာပေါ့..။
မမ ခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လိုးပေးရမှာပေါ့…. အံမယ်..သူကတော့ မလိုးချင်တဲ့ အတိုင်းပဲ..၊ ကဲ..ဘယ်လိုချချင်လဲ ပြော…. မမ နည်းနည်း မောနေသေးတယ် မဟုတ်လား… ဒီတော့ အရင်ဆုံး အပေါ်ကနေပဲ တက်ခွပြီး လိုးမယ်.. ..ကြိုက်လား…. အင်း….လုပ် လေ…လာ တက်.. ကျမက ခေါင်းလေးငြိမ့် သဘောတူလိုက်တော့ သူလည်း ပက်လက်စင်းစင်းလေးရှိနေတဲ့ ကျမကိုယ်ပေါ် အလိုက်သင့် တက်ခွပါတော့တယ်…။ ပက်လက်စင်းစင်းလေးနဲ့ ပေါင်ကြီးတွေ ခပ်ကားကား အိပ်နေတဲ့ ဒေါ်ထားထားစိုး ကိုယ်ပေါ် တက်ခွလိုက်ပြိးတာနဲ့ ကျနော်က သူ့နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးလေး အစုံကို ဖိကပ်နမ်းစုပ်ပေးလိုက်တယ်..။ သူ့အဖုတ်ကို ခုနလေးတင် က ရက် ပေးထားခဲ့တာကြောင့် ကျနော့်ပါးစပ်မှာ သူ့စောက်ပတ်နံ့တွေ သင်းနေတယ်..။ ဒီလို နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့ကပ် စုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ အဖုတ်နံ့ကို သူမ ပြန်ခံစားရမှာပါ..။ ဒါလည်း ကျနော်တို့ အငှါးလင်တွေရဲ့ နည်းပရိယာယ် တစ်ခုပေါ့..။
စောက်ပတ်ရက်ထားပြီးတဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ကာယကံရှင် မိန်းမကို နှုတ်ခမ်းစုပ်ပေးပြီး သူ့ အဖုတ်နံ့ သူပြန်ရအောင် သူ့အဖုတ်ကထွက်တဲ့ အရည်ကြည်တွေ သူပြန်လျှာနဲ့ ထိမိရက်မိအောင် လုပ်ပေးရင် အဲဒီမိန်းမရဲ့ သွေးသားတွေ တစ်မျိုးတစ်မည် နိုးကြွ ရမက်ထန်လာ တယ်..။ စွဲစွဲမက်မက်လည်း ဖြစ်တတ်တယ်..။ ပါးစပ်ချင်းတေ့ကပ်ပြီး ခပ်မျှင်းမျှင်း စုပ်ယူရင်း ဒေါ်ထားထားစိုးရဲ့ မို့ထွားတဲ့ နို့အုံ ကြီးတွေကို တစ်လှည့်စီ ဆုပ်နယ်ပေးသေးတယ်..။ ကော့ထောင်တက်နေတဲ့ နို့သီးတွေကိုလည်း ဖျစ်ညှစ် ဆွဲဆိတ်ပေးတယ်..။ ဒါ တင် ဘယဟ်ုတ်မှာလဲ..။ မတ်တောင်နေတဲ့ ကျနော့်လီးကြီးနဲ့လည်း သူမပေါင်ကြားက စောက်ပတ်ကြီးကို ထိလိုက် ထိုးလိုက် ပွတ်မိ အောင် လုပ်နေသေးတယ်..။ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ပေးရာက အသာ လည်တိုင်ကြော့ကြော့လေးကို မထိတထိ ဖွဖွလေး နမ်းပေးတယ်..။ ဒီမိန်းမ တစ်ချီ ပြီး သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တာကြောင့် လျှော့ကျသွားတဲ့ ကာမစိတ်ကို ပြန်ပြီး အားကောင်း ထန်ပြင်းလာအောင် ဆွပေးမြှင့် ပေးတာပါ..။ သူမနှာထန် ရမက်ပြင်းလာမှ တက်ချတာ သူမအဖို့ရော ကျနော့်အတွက်ပါ ပိုကောင်းမယ်.. မဟုတ်လား..။ ဒေါ်ထား ထားစိုး ဟာ နှာကြီးလွန်းတဲ့ မိန်းမပဲ…။ သိပ်ကြာကြာ မဆွပေးရပါဘူး..။ လူးလွန့်ကော့တက်လာပြီး နှာပြန်တင်းလာပါတယ်..။
ဟင့်ဟင့်…နေမိုးရာ…မင်းကတော့ တကယ်ပဲ အနှိုးဆွ ကောင်းတဲ့ ကောင်လေးပဲ.. ထားစိတ်တွေ ပြန်ထလာပြီ..၊ လုပ်ခံချင်ပြီ ကွာ….ချတော့…နော်.. သူမပါးစပ်က ထုတ်ဖော်ပြောလာပါတယ်..။ ဒီစကားသံမျိုးကြားချင်နေတဲ့ ကျနော်….အပြတ် ခိုက်သွားတာ ပေါ့..။ ကျနော့် လီးကြိးကို ကြိုက်ရဲ့လား…. အင်း..အင်း…ကြိုကတ်ယ်..၊ ကြိုက်လို့ လုပ်ခိုင်းတာပေါ့…. မမ ကို ကောင်းကောင်း လိုးပေးမယ်..နော်.. အင်း…… ဒီလိုအမေးအဖြေ လုပ်တာက ဒေါ်ထားထားစိုးကို ပိုစိတ်ကြွလာအောင် ဖန်လိုက်တာ..။ မေးရင်း ပြောရင်းက သူမရဲ့ ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်းကို ဆွဲယူကိုင်မြှောက်ပြီး ကားနိုင်သမျှ ကားအောင် တွန်းထုတ်လိုက်တယ်..။ ဒီအခါမှာ သူမရဲ့ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းက ဟက်တက်ကွဲပြီး စောက်ခေါင်းဝဟာလည်း အပြူးသား ပေါ်လာပါတယ်..။
ကျနော်က ကိုယ်လိုးရတော့မယ့် စောက်ပတ်ကြီးကို သေသေချာချာ တစ်ချက်ကုန်းကြည့်ပြီး လီးကို စောက်ပတ်ပေါ် အလျားလိုက် အသာလေး ကပ်တင်ပေးထားတယ်..။ ဒေါ်ထားထားစိုးက ပက်လက်အိပ်နေရာကနေ အသာလေး ခေါင်းလေးထောင်ပြီး သူ့အဖုတ် ပေါ် လီးချောင်းတေ့ကပ်ထားတာကို ကြည့်တယ်..။ အမလေးကွာ…မင်းဟာကြီးကတော့ကွာ…တကယ့်ဟာကြီးပဲ.၊ နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး..၊ မာတောင်နေတာပဲ ..သွင်းတော့လေကွာ…. ချပါတော့.. ထားမနေနိုင်တော့ဘူး… လီးကိုကြည့်ပြီး ရမက်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပြောတယ်..။ ကျနော်က လီးကို ညာဖက်လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ဒေါ်ထားထားစိုးရဲ့ စောက်ပတ်ကို ပိုပြဲသွားအောင် ဘယ်လက်နဲ့ဆွဲဖြဲလိုက် တယ်..။ ပြီးတော့ ငေါက်တောက်ကြီးပေါ်လာတဲ့ စောက်စေ့ကို လီးထိပ်နဲ့ တေ့ကပ်ပွတ်ပေးလိုက်တယ်..။ စောက်စေ့ဟာ ထိပွတ်မိ တော့ စစ်ခနဲစစ်ခနဲ ကို ဖြစ်သွားတယ်..။ အိုး….အို…မောင်ကလည်းကွယ်…ဘယ်လိုများလုပ်နေတာလဲ….လို့ ထားမနေနိုင်တော့ဘူး ကွယ်..၊ စောက်ပတ်ထဲက သိပ်ကိုယားနေပြီ… လိုးပါတော့ကွာ.. မောင့်လီးကြီးနဲ့ ထားကို လိုးပါတော့.. သွင်လေ…. တစ်ချက်တည်း အဆုံးဝင်အောင် သွင်းချရမလား.. အင်း အင်း…. မမ ခံနိုင်ပါတယ်..နော်… ၇တယ်..သွင်းမှာသာ သွင်းစမ်းပါ…၊ ဒီမှာ ယားလို့ သေလိမ့်မယ်…လိုးမှာလိုးတာမဟုတ်ဘူး.. ဒေါ်ထားထားစိုးဟာ ဖင်ကြီးကို ကော့ပင့်ပေးထားတယ်..။ သူ့ဖင်အကော့ မှာ ကျနော်ကလည်း ခါးအား ပေါင်အားတွေ အပြင် ကိုယ်လုံးဖိအားပါ ဖြည့်ထည့်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ လီးကို ထိုးဆောင့်သွင်းချ လိုက်ပါတယ်…။ ဒီလိုသွင်းတာ…ကြမ်းတော့ကြမ်းတယ် ပြောရမယ်..။ ဒါပေမယ့် အဝင်အရမ်းထိတာကြောင့် အသွင်းခံရတဲ့ မိန်းမ ဟာ နာပေမယ့် အရမ်းကို စွဲမက်သွားတတ်ကြတာ ကိုယ်တွေ့ပဲ..၊ အခုလည်း ဒေါ်ထားထားစိုး ဒီလိုဖြစ်ရအောင် တမင်ကို လုပ်လိုက် တာ..။
ဘွတ်.ဘု ဘု ဘွတ်.ဗျစ်….. သူ့စောက်ခေါင်းထဲမှာ စောက်ရည်တွေ ပြည့်လျှံနေပြီး..၊ အဖုတ်ကို ကျကျနန ဆွဲဖြဲပြီးမှ အားပြင်းပြင်း ဖိထိုးသွင်းချလိုက်တာမို့ လီးက တရှိန်ထိုး ဝင်သွားတယ်.. ။ ဝင်တာမှ အဆုံးထိပဲ… စောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်သွားတဲ့ အသံကလည်း တော်တော်ကျယ်တယ်..။ အား အာ….အ…နာတယ်…ကျွတ်ကျွတ်… အရမ်းကြီးပဲ…… နာလိုက်တာကွာ….ဟင့် ဟင့်….. ဒေါ်ထား ထားစိုး မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့သွားပြီး ကျနော့်ရင်ဘတ်ကိုလည်း လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ဆီးပြီးတွန်းရှာတယ်…။ တော်တော်ကို နာသွားပုံပါ ပဲ…။ ပါးစပ်က သာသွင်းပါ သွင်းပါပြောနေပြီး တကယ်ထိုးသွင်းတော့ ဒီလောက်အော်ရလား… မမရ… ကျနော်က သူ့နို့ကြီး တစ်ဖက်ကို လှမ်းကိုင်ဆွဲလိုက်ရင်း ပြောတယ်..။ အလုပ်ခံချင်နေတာကိုး…. သွင်းခိုင်းရတာပေါ့..၊ ဟင့်..မောင့်လီးက အရမ်းကြီး တဲ့.ဟာ..၊ ဒါကြီးကို တအားဆောင့်ချလိုက်မှတော့ နာတာပေါ့…၊ နာရင် အော်မှာပဲ…
ဒေါ်ထားထားစိုးက နှုတ်ခမ်းလေး မစူတစူနဲ့ ပြောတယ်..။ အပျိုပေါက်မလေး အမူအရာမျိုးမို့ ကျနော့်ရင်ထဲ ကျလိကျလိဖြစ်ပြီး သူ့ ပါးတစ်ဖက်ကို လှမ်းလိမ်ဆွဲလိုက်မိတယ်..။ နာတယ်ဆို လီးပြန်ထုတ်လိုက်မယ်..လေ…. အံမယ်..တော်စမ်းပါ…သွင်းပြီးမှတော့ ထုတ်မနေပါနဲ့တော့…. ဒါဆို…ဘာလုပ်ပေးရ မှာလဲ…. ဆောင့်ပေးပေါ့…လို့…တကယ်ပဲ…. ကျနော်လည်း သူ့စောက်ပတ်ထဲ အကြပ်အသိပ်တိုးဝင်နေတဲ့ လီးချောင်းကြီးကို ခပ် ဖြည်းဖြည်း ပြန်ဆွဲထုတ်တယ်..။ တစ်ဝက်သာသာလောက် ထတ်ုပြီးတော့ ခပ် ဖြည်းဖြည်းပဲ ထိုးသွင်းပြန်ထုတ်နဲ့ ညှောင့်ပေး တယ်..။ ခပ်ဖြည်းဖြည်း လိုးနေပေမယ့် စောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်ထွက်နေတဲ့ အသံလေး တွေကတော့ တဖုတ်ဖုတ် တဖတ်ဖတ် မြည် နေတယ်..။ ဒေါ်ထားထားစိုးဟာလည်း မျက်တောင်တွေ မှေးစင်းကျပြီး တဟင်းဟင်း ဖြစ်နေတယ်..။
ဘယ်လိုလဲ…ဒီလိုညှောင့်ပေးတာ ခံလို့ ကောင်းရဲ့လား… ကောင်းတော့ ကောင်းတယ်… ဒါပေမယ့် သိပ်အားမရဘူး…. ဒါဆို ဆော င့်လိုးပေးမယ် လေ…. ဒီလိုမျိုး ပက်လက် ပေါင်ထောင်အနေအထားနဲ့ တအားဆောင့်ရင်တော့ ထားခံနိုင်မယ် မထင်ဘူး မောင်ရဲ့..၊ ဟို….ထား တစောင်းကွေးပေးမယ်လေ… နောက်ကချပေါ့…. မမကြိုက်သလို လိုးပေးရမယ့်လူပါ… ကဲ.. ကွေးပေးလေ..၊ လီးကို တော့ အဖုတ်ထဲ ထိုးကပ်ပေးထားမယ်… စောက်ပတ်ထဲ လီးတပ်ရက်နဲ့ နေရာပြောင်းတတ်တယ် မဟုတ်လား…. လုပ်ကြည့်မယ် လေ….ကျွတ်ထွက်သွားလည်း ပြန်ထည့်ပေါ့လို့…. ပက်လက်ပေါင်ထောင်လိုးနေရာကနေ တစောင်းကွေးအနေအထား ပြောင်းရ တာ သိပ်တော့ မခက်လှပါဘူး..။ ဆွဲထောင်ထားတဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက ညာဖက်ခြေထောက်ကို အသာတိမ်းယူပြီး ကိုယ် ဘယ်ဖက်ကွေးချ ခါးအသာလိမ်လိုက် ဘယ်ဘက်စောင်းလိုက်ပြီး ခပ်ကွေးကွေးလေးဖြစ်အောင်းပြုပြင်လိုက်ရုံပါပဲ…။ လီးနဲ့စောက် ပတ် တပ်ရက်သားက ကျွတ်ထွက်မသွားအောင် နှစ်ယောက် အပေးအယူမျှမျှ လှုပ်ရှားဖို့ပဲ လိုပါတယ်..။
ဒီလို အလှုပ်အရှားမှာ လီးကစောက်ပတ်ထဲ ထထိမိမိ ပွတ်ကပ်နေတာရယ် ၊ လီးကျွတ်မသွားရအောင် သတိထားနေရယ်ကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖီလင်တစ်မျိုးပေါ့..။ နှစ်ယောက်သား အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားလိုက်ကာ ဒေါ်ထားထားစိုး တစ်ယောက် ဘယ်ဘက် စောင်းရက် ခပ်ကွေးကွေးလေးနဲ့ ကျနော် သူ့နောက်က ဘေးစောင်းကပ်အိပ်ရက် အနေအထားကို ပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်..။ လီးက လည်း အဖုတ်က ကျွတ်မထွက်ဘူး..။ တပ်ရက်တန်းလန်းပဲ..။ ကျနော်က ဒေါ်ထားထားစိုးရဲ့ ကားအိနေတဲ့ ဖင်ဆုံကြီးအပေါ် ညာ ပေါင်ခွချိတ်ပြီး နောက်ကနေ ခပ်ပြင်းပြင်းလိုးဆောင့်ပေးတယ်..။ တစောင်းကွေးလိုးကြတဲ့အခါမှာ အထိရောက်ဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့ အောက်ပင့်ဆောင့်နည်းနဲ့ လီးကို ကော်ကော်ထိုးပင့်တင်ပြီးဆောင့်လိုးပေးလိုက်တာပါ…။ စောက်ပတ်ဟာ ပေါင်နှစ်လုံးကြားညှပ်နေ တာမို့ အဝင်အထွက် ပိုစီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိတယ်..။ တဗျစ်ဗျစ် တဘုဘု အသံလေးတွေတော့ ဆက်တိုက်မြည်နေတယ်..။
အခုလို တစောင်းကွေးထားပြီး ချတာ စောစောက ပက်လက်လိုးပေးတာနဲ့ ဘယ်လိုထူးခြားလဲ… ပိုခံလို့ကောင်းလား…မမ… အောက်ပင့်ဆောင့်ချက်တွေ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုပေးရင်း ကျနော်က မေးလိုက်တယ်..။ ဟင့်ဟင့်…အခုလို ကွေးပြီးနောက်က ခွ လိုးတာ ထားရဲ့စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေနဲ့ လီးချောင်းကြီး ပိုပြီးထိမိ ပွတ်တိုက်မိတော့ စီးစီပိုင်ပိုင်နဲ့ အရသာတစ်မျိုးရှိတယ်..၊ ဒါ ပေမယ့် ဟို…..လီးကအဆုံးဝင်အောင် ဆောင့်လို့မရတော့ တစ်မျိုးကြီး ပဲကွာ…. ပက်လက်လှန်ပြီး ပေါင်ထောင်ချမှ လီးက စောက် ပတ်ထဲ အဆုံးဝင်မှာပေါ့…အခုလို နောက်က ကွေးချရင် လီးအဆုံးဝင်အောင် ဆောင့်ပေးဖို့ခက်တယ် …မမရဲ့… ဟုတ်ပါတယ်…ဒါ ပေမယ့် ပက်လက်ပေါင်ထောင်ပြီး အရမ်းဆောင့်လိုးရင် ကြာရှည် ဘယ်ခံနိုင်မှာလဲ..၊ သားအိမ်ကို စိုက်စိုက်ထိသွားတဲ့ဟာ… မောင် ကော နောက်ကနေ ကပ်လိုးရတာ အားရရဲ့လား… ကျနော်က ရပါတယ်…မမရယ်… ၊ မမ ဖီလင်ကောင်းကောင်းရဖို့ အဓိကပါ..၊ သားအိမ် ကို လီးမစိုက်မိပဲ အဆုံးဝင်အောင် အပီးဆောင့်နိုင်တဲ့ ပုံစံရှိတယ်..၊ အဒီပုံစံနဲ့ ခံကြည့်ပါလား… အင်း…စမ်းကြည့်တာ ပေါ့…အခုလေးငါး ဆယ်ချက်လောက် ခပ်ပြင်းပြင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးပေးအုန်းကွာ… ကျနော်က သူမခါးကို တင်းတင်းဆွဲ ပြီး လီးကို တအားကော့ပင့် ဆောင့်သွင်းပေးလိုက်တယ်..။
ဘွတ်…ဘု…အား ဟင့်….ခါးကိုမဆွဲနဲ့ကွာ…နို့ကို ကိုင်ညှစ်ပြီး ဆောင့်ပါလား…. ဒါကြောင့် ကျနော်လည်း ခါးကို မဆွဲတော့ပဲ နောက် ကနေ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ခပ်တင်းတင်း စုံကိုင် ဆွဲညှစ်ပေးပြီး ကော့ကော့ ဆောင့်ပေးလိုက်တာ ဒေါ်ထားထားစိုး ဖင်လုံးကြိးတွေ တ တုန်တုန် လှုပ်ခါနေတာပဲ..။ ဆယ်ချက်လောက် အားပြင်းပြင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ပေးလိုက်ပြီး လီးကို အရင်းထိ ထိုးကပ်ဖိစိမ် ပေးထားလိုက်တယ်…။ မမ…လိုးနည်းပုံစံ ပြောင်းရအောင်… ပြောင်းလေ…ဘယ်လိုမျိုးလဲ…. ညာပေါင်ကြီးကို ထောင်လိုက်…၊ ဘယ်ပေါင်ကို တော့ ခပ်ကွေးကွေးလေး မွေ့ရာပေါ်မှာ ချထား..၊ ကိုယ်ကို မစောင်းတစောင်းလုပ်…ဟုတ်ပြီ….. သူမကို အနေအထားပြောင်းပေးဖို့ ပြောဆိုသင်ပြရင်း ကျနော်လည်း သူမနောက်ကျောမှာ ကပ်ပြီး တစောင်းအိပ်နေရာက အသာထထိုင် လိုက်တယ်..။ အလိုက်သင့် ထောင်ပေးလာတဲ့ သူမ ညာဖက်ပေါင်ကြီးကို ပွေ့ပိုက်ထိန်းထားပြီး ကျနော့်ညာဖက်ပုခုံးပေါ် ဆန့်လျက် တင်ပြီး သူမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲ ဖိကပ်ထိုးစိုက်ထားတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ လီးချောင်းကြီး ပြုတ်မထွက်သွားရအောင် ထိန်းတဲ့သဘောနဲ့ ဖင် ကြီးကို ကြွနိုင်သမျှ ကြွတင်ပေးထားတယ်…။
ကျနော်က အလိုက်သင့် သူမပေါင်ကြားထဲ တိုးဝင်ပြီး ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကို မွေ့ရာပေါ်ကွေးတင်ထားတဲ့ သူမဘယ်ဖက်ပေါင် အပေါ် ခွဲချိတ်လိုက်တယ်..။ တစ်ဖက်ပွင့် ဘယ်တစောင်းလိုးနည်း မှန်သွားပါပြီ..။ ထောင်ထားတဲ့ ညာဖက်ပေါင်တန်ကြီးကို အပီ ကိုင်ထိန်းပြီး ခပ်သွက်သွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးဆောင့်ပေးလိုက်တယ်..။ ဆောင့်နေရင်းက သူမညာဖက် ဖင်သားခြမ်းကြီးကိုလည်း ကိုင်ညှစ်လိုက် ၊ ပွတ်ပေးလိုက် တစ်ခါတစ်ခါ ခပ်ဆတ်ဆတ် ရိုက်ပေးလိုက် လုပ်ပေးတယ်..။ ခါးက မလိမ့်တလိမ် စောက် ပတ်ထဲကို ဘေးစောင်းမကျတကျ လမ်းကြောင်းကနေ လီးကို ဆောင့်ထိုးလိုးပေးတာမို့ လီးဟာ သားအိမ်ကို မထိခိုက်တော့ပဲ သားအိမ်ဘေးနားက ကပ်ပြီး အတွင်းဘက်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တိုးဝင်နေတယ်…။ ဆောင့်လိုးနေတဲ့ ကျနော့်အနေနဲ့ ဒေါ်ထားထား စိုးရဲ့ ပေါင်ကြီးနဲ့ တင်ပါးဆုံကြီးကို အနေအထားမှန်နေအောင်တော့ စနစ်တကျ ကိုင်းထိန်း မပေးထားရတာပေါ့…။
ဒီလိုကိုင်ထိန်းပေးမထားရင် အနေအထားလွဲပြီး လီးက သားအိမ်ကို ချော်ထိုးမိ ထောက်မိသွားနိုင်တယ်..။ အလိုးခံနေတဲ့ ဒေါ်ထား ထားစိုး နာနာကျင်ကျင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်..။ ဒါကြောင့် သတိထားပြီး သေသေချာချာ ဆွဲထိန်းရင်း ဆောင့်လိုးရတာ..။ လီးကို စောက်ပတ်ထဲအဆုံးဝင်အောင် အားပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့်လိုးရတာကြောင့် ကျနော့်အဖို့ သိပ်ကို အကြိုက်တွေ့နေရပါတယ်..။ ဘယ့်နှယ်လဲ…ဒီလိုပုံစံနဲ့လိုးတာ လီးအဆုံးဝင်ပေမယ့် သားအိမ်ကို မထိဘူးမို့လား..၊ ခံရတာ ကောင်းလား…. အင့်..ဟင့်ဟင့် ကောင်းပါတယ်ကွာ..၊ လီးကြီးက အဆုံးဝင်တာ အဖုတ်အတွင်းဘက်ထဲအထိ နင့်နေတာပဲ..၊ ဒါပေမယ့် နို့ကြီးတွေကို လှမ်းမဆွဲနိုင် တော့ အဲဒီမှာ ဟာတာတာကြီးနဲ့ ၊ ထားက နို့ဆွဲပြီး ဆောင့်လိုးတာကို သိပ်ကြိုက်တာ…
ဒါဆို…ကျနော် နို့လှမ်းဆွဲကြည့်မယ်..မမက ကိုယ်ကို ကော့ကြွပေး…ဟုတ်လား…. ဒီလိုတစ်ဘက်ပွင့်လိုးနည်း ပုံစံနဲ့ လိုးရင်း..၊ ဖင်ကြီးကိုပဲ အဓိကထားကိုင်ပွတ် ဖျစ်ညှစ်နိုင် တာ…၊ နို့ကိုတော့ တစ်ခါမှ လှမ်းဆွဲပြီး မလိုးဖူးသေးဘူး…။ ဒေါ်ထားထားစိုးက နို့ဆွဲပြီး ဆောင့်လိုးတာမှ အားရတယ်ဆိုတော့ ကျ နော်လည်း စမ်းကြည့်ရတာပေါ့..။ ထောင်ထားတဲ့ သူ့ညာဖက်ပေါင်ကို ညာလက်နဲ့ပဲ ကိုင်ထိန်းပြီး ဘယ်လက်ကိုတော့ သူ့နို့ ကြီး တွေဆီ လှမ်းလိုက်တယ်..။ ဒေါ်ထားထားစိုးကလည်း တတောင်ဆစ်နဲ့ အားပြုထောက်ပြီး ရင်ဘတ်အလိုက်သင့် ကြွပေးတော့ နို့ ကြီးတစ်လုံးကို လှမ်းမီတယ်..။ ခပ်တင်းတင်း ဆွဲညှစ်ပေးပြီး တအားကုန် ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တယ်..။
ဘွပ် ဘွပ် ဗျစ် ဗျစ်…ဒုတ်……ဒုတ်.. ဆောင့်ရတာ ပိုကောင်းလာသလိုပဲ..။ နို့ကြီးကို ဆွဲကိုင်ညှစ်ထားရတာကလည်း စီးစီပိုင်ပိုင်နဲ့..။ အဲ …ခါးက မကုန်းတကုန်းမို့ နောက်ကျောတော့ အတော်ညောင်းတယ်..။ ဒေါ်ထားထားစိုးမှာတော့ နို့အပီဆွဲပြီး ဆောင့်လိုးတာခံရ လို့ အရမ်းကို သဘောကျဇိမ်တွေ့နေတာ အသိသာကြီးပါပဲ…။ အင့်ဟင့်ဟင့်….ကောင်းလိုက်တာကွာ..။ နို့ကို ဆွဲပြီး အပီးလိုးစမ်း ပါ…အောင်မယ်လေး လေး….. မမ…အခုလို လိုးတာ ကြိုက်ပြီလား….. အင်း….အင်း လိုးစမ်းပါ တအားဆောင့်…. နို့ကိုလည်း တ အားဆွဲညှစ်…ဆောင့် ဆောင့်… ဆောင့်စမ်းပါ….. အား…..ဆောင့်ပါ…. ဆောင့်ပါ….. တအားကြီး ဆောင့်ပစ်စမ်းပါ….. မောင် ရဲ့….အီး….. အိုး…….. ဟင့်ဟင့်……. ကျနော်လည်း နောက်ကျောညောင်းလို့ ညောင်းမှန်း မသိတော့ပဲ ရှိသမျှ အားတွေ အကုန်ထုတ် သုံးပြီး ဒရကြမ်းကို လိုးပစ်လိုက်မိတယ်…။ အချက်တစ်ရာကျော စက်သေနတ်ပစ်သလို ဆောင့်လိုးပေးပြီးတဲ့အခါ ကျနော့် သုတ် ရေကို ဆက်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး…။ ပန်းထုတ်ချင်လာပြီ…။ ဒေါ်ထားထားစိုးကြည့်ရတာလည်း နောက်တစ်ချီ ထပ်ပြီးတော့မယ့် အနေအထားမို့ အားခဲပြီး ဆယ်ချက် အသားကုန် ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ ဒေါ်ထားထားစိုးရဲ့ စောက်ပတ်ကြီးထဲ ကျနော့် လီးချောင်းကြီးကို အဆုံးထိ ဖိကပ်ထိုးသွင်းပြီး ညာဖက်ပေါင်တန်ကြီးကို ခပ်တင်းတင်း ဆွဲထားလိုက်တယ်..။ သူ့နို့ကြီးတစ်လုံးကို လည်း အုပ်ကိုင်ပြီး တအားဆွဲညှစ်ပေးထားလိုက်တယ်..။
အဖုတ်ထဲ ဖိကပ်ထိုးသွင်းထားတဲ့ လီးက ငေါ့ခနဲ ငေါ့ခနဲ လှုပ်ခါတယ်..။ ကျနော့်တစ်ကိုယ်လုံး အကြောတွေဆွဲသလို တွန့်ခနဲ တွန့် ခနဲ ဖြစ်တယ်..။ အဲ….နောက်တော့ လီးတန်ထိပ်က သုတ်ရေတွေ ပန်းထွက်ပြီး ဒေါ်ထားထားစိုးရဲ့ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ ဝင်ကုန် တယ်..။ အဲဒီအခါမှာ ဒေါ်ထားထားစိုးဟာလည်း သိမ့်သိမ့်တုန်ခါပြီး နောက်ထပ်တစ်ချီ ပြီးသွားပြန်ပါတယ်…။ အောင်မယ်လေး လေး….ကောင်းလိုက်တာ…… မောင်ရာ…သိပ်ကောင်းတာပဲ…..၊ ဟင့်ဟင့်…. မောင့်လရေတွေကလဲ တကယ်ပဲ…များလိုက်တာ…. ထားတော့ မောင့်ကို အပြတ်စွဲသွားပြီ ကွာ…… ဒေါ်ထားထားစိုးက အံကြိတ်သံလေးဖြင့် ပြောရင်း သူမ၏ နို့အုံတစ်ဖက်ကို တအား ကိုင်ညှစ်ထားတဲ့ ကျနော်ရဲ့ ဘယ်လက်ကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်တယ်..။ သူ့စောက်ပတ်ကလည်း တရွရွလှုပ်ရှားပြီး ကျနော့်လီးကို စစ်ခနဲ စစ်ခနဲနေအောင်ကို စုပ်ယူနေတာ… သိပ်ခံလို့ကောင်းတယ်ဗျာ….။ လီးကို စောက်ပတ်ထဲ အတော်ကြာအောင် ထိုးကပ် စိမ်ထားပြီး ဒေါ်ထားထားစိုးလည်း အသက်ရှူမှန်သွားတဲ့ အခါကျမှ အသာပဲ ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်..။ လူချင်းလည်း ခွာပြီး ခုတင် စောင်းမှာ ထိုင်ချလိုက်တယ်..။
မင်းက မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဖီလင်တွေ အပြတ်ရအောင် ၊ အရသာတွေ့အောင် လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာ သိပ်ကို ကျွမ်းကျင်တာပဲ နော်… ဒီလို လုပ်နည်းကိုင်နည်းတွေ ကျွမ်းနေအောင် မင်းဘယ်လိုများ သင်ထားတာလဲ…၊ မင်းကို သင်ပေးတဲ့လူရှိလား…၊ ထားသိ ချင်တယ်….. ပြောပြပါလား…ဟင်…. ဒေါ်ထားထားစိုးက မေးလာတယ်..။ ဒီလို မေးလာတဲ့ အခါမှာ ကာမမှုတွေအကြောင်း လက်ထပ်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ လူတွေ အကြောင်း ကျနော် ပြန်အမှတ်ရလာတယ်…။ တကယ်တော့ အဲဒီအကြောင်းတွေ သူများကို ကျနော် ပြောလေ့ပြောထ မရှိပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်ထားထားစိုးကိုတော့ ဒီအကြောင်းတွေ ပြောပြချင်တဲ့စိတ် ရှိနေပါတယ်..။ မမ….တကယ်ပဲ….ဒီအကြောင်းတွေ သိချင်လို့လား…. အင်းပေါ့….သိချင်တယ်….ပြောပြကွာ…… အဲဒီအကြောင်းတွေ ပြောရရင် တော့ ဇာတ်လမ်းရှည်တယ်…. မမရဲ့…၊ မမက နားထောင်ချင် သိချင်တယ်ဆိုတော့ ကျနော်ပြောပြရတော့မှာပေါ့လေ….. ဒီ…..လို….ပါ…..မမ…….ရယ်…..
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အရာရှိမ ဒျေါထားထားစိုး နဲ့ နမေိုး
ဧပွီရယျ ဂြူလိုငျရယျ မောငျရယျ